ဘကြီးတော်ဘုရား (၁၈၁၉-၁၈၃၇) လက်ထက်တွင် ပထမ အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ စစ်ပွဲ (၁၈၂၄ – ၁၈၂၆) ဖြစ်ပွားပြီး အာသံ ၊ မဏိပူရ ၊ ရခိုင်နှင့် တနင်္သာရီ တို့ကို အင်္ဂလိပ် အရှေ့အိန္ဒိယ ကုမ္ပဏီလက်သို့ ပေးအပ်ခဲ့ရသည်။ ပထမအကြိမ် အင်္ဂလိပ်တို့ မြန်မာနိုင်ငံကို ကျူးကျော် စစ်ြပုသည့် (၁၈၂၄) ၁၁၈၆ခုနှစ် ၀ါခေါင်လတွင်ဟံသာဝတီ ရန်ကုန်ကို အင်္ဂလိပ်စစ်သင်္ဘော ၄၀နှင့် ၀င်ရောက်တိုက်ခိုက်သည်ကို ဖန်လ်နန်းရှင်မင်းတရားကြီးဟု ထိုကာလလူတို့ ခေါ်ဝေါ် သမှုပြုသည့် ဘကြီးတော်မင်းထံမှ မြိတ်မြို့ဝန် ဦးမြတ်လေးထံသို့ နောင် အင်္ဂလိပ် စစ်သင်္ဘောများ မြိတ်မြို့သို့ ၀င်ရောက်လာပါက ခုခံရန် ပြင်ဆင်ထားရမည်ဟု အမိန့်စာချွန်တော်ဖြင့် စေတော်မူလေသည်။
မြိတ်မြို့ဝန် ဦးမြတ်လေးသည် မြို့အ၀င် ကမ်းခြေလူနေရပ်ကွက်ဖြစ်သော ဆိပ်ငယ်ရပ်ကွက်ကို ဖျက်ပြီး သူရဲခို ကတုတ် ခံတပ် အခိုင်အခံ့တည်ဆောက်စေကာ အမြောက်ငယ် ၃၅လုံးဖြင့် ရှေ့ခံစစ်ကြောင်း တည်စေ၏။
ထိုမှ ပေါ်တူဂီအမြောက်ဗိုလ် ရော်ရှင်ကို အကြီးအမှူးခန့်ထားသည့် ဗရင်ဂျီအမြောက်သားများဖြင့် နောက်ဖက်ကျသည့် ကုန်းမြင့်တလျောက် သိမ်တော်ကြီးကုန်းမှ ၀တ်တိုက်ကျောင်းတောင် ဘူး-ဘုရား အရောက် ကြေးအချိန် ၇ဝဝ ရှိသော “ကျည်ဝ နှစ်မိုက်၊ အလျား ခုနှစ်တောင်၊ အမြောက်ကြီး အလက်၃၀ကျော်ကို ခင်းကျင်းစီမံထားလေသည်။ (ကျည်စေ့ လုံးပတ် နှစ်ထွာ၊ အချိန် ငါးဆယ်)
မြိတ်မြို့ဝန် ဦးမြတ်လေး၏ လက်အောက် မြို့စာရေးများဖြင့် စီရင်စုနယ်များဖြစ်သော တနင်္သာရီမြို့သို့၎င်း ပုလောမြို့သို့၎င်း လူသူဆင့်ခေါ်ရာတနင်္သာရီချောင်းကြီးကျောင်းမှ ခင်ကြီးဘိုးက ညင်းဆန်ကာ မြို့သူမြို့သားများနှင့် ခုခံသောကြောင့် မြိတ်မှ ဗိုလ်ခြေလွတ်ကာ
သိမ်းယူစေပီး ခင်ကြီးဘိုးကို ၀တ်ဖြူလဲစေကာ တနင်္သာရီမြို့စာရေး မောင်မြတ်လေးနှင့်အတူ မြိတ်မြို့ ကန်ကြီးရေကန်ဘောင်ပေါ်တွင် အဆုံးစီရင်လေသည်။
ပုလောမြို့တွင်လည်း စစ်မလိုက်လိုသူများသဖြင့် သေနတ်များပစ်ဖေါက် ခြောက်လှန့်ကာ ယောကျား မိန်းမ အကုန်အစင် မြိတ်သို့ ဆောင်ယူနေရာချကာ အင်္ဂလိပ်ကို ခုခံရန် စီစဉ်နေစဉ်-
ထားဝယ်မြို့သို့ အင်္ဂလိပ်စစ်သင်္ဘောများ ရောက်ရှိလာလေသည်။
ဖန်လ်နန်းရှင်မင်းတရားကြီးအမိန့်အရ ထားဝယ်မြို့ဝန် ဦးရွှေတုတ်မှ ခုခံမည်ကို ရေ၀န်မောင်ဓါးက သစ္စာဖေါက်ပုန်ကန်ပီး မြို့ဝန် ဦးရွှေတုတ်ကိုလက်ရဖမ်းကာ အင်္ဂလိပ်မင်းလက်သို့ အပ်ကြောင်း ထားဝယ်မှ သတင်းရောက်လျှင် အင်္ဂလိပ်တပ်ကိုတိုက်ကာ ထားဝယ်မြို့ဝန်ကို ကယ်ဆယ်ရန် သစ္စာဖေါက် ရေ၀န်မောင်ဓါးကို ဖမ်းဆီးရန် တိုက်လှေ၃၀ စစ်သည် ၁၀၀၀ (တထောင်)နှင့် ကိုယ်တိုင်ချီလေသည်။
စစ်ကဲမင်း ကိုရွှေကြာတပ်နှင့် အခွန်မင်း ရေ၀န် အခွန်ဝန်တို့ကို မြို့နေ မြို့စောင့်ရန် ထားရှိလေ၏။
မလိကျွန်းငယ် အရောက်တွင် အင်္ဂလိပ် စစ်သင်္ဘော ၄စီး မြိတ်သို့ ချီလာကြောင်းသတင်းရလျှင် စစ်ကြောင်းကို ပြန်လှည့်ကာ မြိတ်သို့ပြန်ဝင် အခိုင်ပြုလျှက် အသင့်စောင့်လေသည်။
ရေ၀န်မောင်ဖိုး စစ်ကဲမုတ်ဆိတ် အခွန်မင်းမောင်မြတ်ရာ အကောက်ဝန်မောင်ယောက် စာရေးတော်ကြီးမောင်တော စာရေးတော်ကြီးမောင်ပိန် စာရေးတော်ကြီးမောင်မှုန် မြို့နာခံတော်မောင်လုပ် မြို့သူကြီးမောင်သုတ် မြို့စာရေးကိုပိန် မြို့စာရေးကိုမြတ်လှ စတိန်သူကြီးဦးဒေါင့် ထားဝယ်စုသူကြီးကိုပါ မြစ်ငယ်သူကြီးကိုရှံ လယ်ကျွန်းသူကြီး ကိုဖုန်းသီ နောက်လည်သူကြီး ကိုပန်းဦးတို့ ဦးစီးသော စစ်ကဲအဖွဲ့(ဗျူဟာဌာနချုပ်) က အမြောက်တပ်ဗိုလ် ရော်ရှင်၏ ဗရင်ဂျီအမြောက်သားများဖြင့် အမြောက်ကြီး ၂၅လက်ကို တာဝန်ယူ ပစ်ခတ်ရမည်။
သိမ်တော်ကြီးကုန်းပေါ်မှ မြိတ်မြို့ဝန် ဦးမြတ်လေး၏ ပင်မကွပ်ကဲရေးတွင် စာရေးကြီးမောင်စိန် ဆရာထွဏ်းဦးအဖွဲ့က အမြောက်၅လက်ကိုပစ်ရမည်။
ဆိပ်ငယ် ရေဆိပ် သူရဲခိုက နောက်လယ် တပ်ခေါင်းအထိ စစ်ကဲမင်း ကိုရွှေကြာက ဦးစီးပစ်ခတ်ရမည်။ မြိတ်မြို့ဝန်၏ စစ်အင်္ဂါတွင် ‘လေးရွာပြု’ ဖွဲ့စည်းပုံ -စစ်သည်သူရဲ ဒိုင်းကိုင် လှံဓါးဆွဲ ၅ဝ၊ လေးမြားသမား၂၅၊ သေနတ်ကိုင် ၇၅၊ အမြောက်သမား ၉ဝ နှင့်စစ်ဝန်ထမ်း ၅ဝ- ပါရှိသည့် ပင်မတပ် ၄တပ်နှင့် ဆင့်ခေါ်တပ်သားများပါဝင်သည်။
တနင်္သာရီ မြို့သားသေနတ်ကိုင်တပ် (လူ-၃၀၀နှင့် သေနတ်-၃၀၀ကို ၇၅ယောက်ပါ တပ်ခွဲ) ၄ဖွဲ့ဖွဲ့ပီး တပ်ဗိုလ် မောင်မောင်မြတ်ရာက အဦးအစီးပြုပြီး သိမ်တော်ကြီးကုန်းခြေရင်းတွင် နေရာယူ တပ်စွဲသည်။
၁၁၈၆ခုနှစ် သီတင်းကျွတ်လဆန်း၉ရက်နေ့ နံက် ၈နာရီတွင် အင်္ဂလိပ် ကြက်တောင်ပန်းဗိုလ်မှူး ဦးစီးသော စစ်သင်္ဘော ၄စီး ကျောက်မီးသွေးရုံဆိပ်သို့ ဆိုက်ရောက်လေသည်။
ထားဝယ်မြို့သား မောင်ခွေးဖြူကို အလံတချောင်းကိုင်စေပီး အင်္ဂလိပ်ဗိုလ်မှူးက စာချွန်တော် စေလွတ် လေသည်ကို တပ်ဗိုလ်တပ်မင်းအစုံညီရှေ့တွင် ဖတ်ကြားစေသည်။
အင်္ဂလိပ်မင်း၏စာတွင် ထားဝယ်ကို ရေ၀န်မောင်ဓါးကအပ်သဖြင့် မောင်ဓါးနှင့် ဇနီး သားသမီးများကို ရှေးကထက်တိုးပီး အင်္ဂလိပ်မင်းစစ်ဗိုလ်တို့က မြင့်မြတ်သောရာထူး ခန့်ထားတော်မူသည်။ မောင်ဓါး၏သား မောင်ရွှေပုကို ဗိုလ်တင်ကာ ၀ယ်သား၅၀၀ တပ်ဖြင့် အင်္ဂလိပ်မင်းဖက်မှ ပါလာသည်။
မြို့ဝန် မောင်မြတ်လေးသည် မြို့ကို အပ်မည် မအပ်မည် အမြန်သိလိုသည်ဟု ပါလေသည်။
စာဖတ်ပြီးနောက် ငခွေးဖြူကို ယူလာသော အလံကို ကိုင်စေလျက် ငရွေးဗိုလ်လက်သို့ အပ်ကာ တဇပြင်သို့ ထုတ်စေပီးမှ ထောင်သွင်းထားရမည်ဟု မိန့်လေသည့်အတိုင်းထောင်သွင်းထားလေသည်။
အင်္ဂလိပ်တို့လည်း အခင်းအကျင်းကိုမြင်လျှင် နံက်၉နာရီခန့်တွင် ကျောက်မီးသွေးရုံတံတားက သင်္ဘောတစီ်း ရေစီးတွင် သင်္ဘောတစီးး တံတားကြီးတွင် သင်္ဘော၂စီ်း စည်းကြပ်ကာနေရာချထား လေသည်။
မြိတ်မြို့ဝန် ဦးမြတ်လေးက သိမ်တော်ကြီးကုန်းပေါ်ရှိ စေတီတော်ကြီးအောက် ကျောက်တန်းတွင် ရွှေထီး၂လက် မိုးကာထိုင်လျက် သင်္ဘော၎စီ်း စည်းကြပ်ကာနေရာချထား နေသည်တို့ကိုကြည့်ပြီးလျှင်
၁၀နာရီထိုးလျှင် ပင်မကွပ်ကဲရေးတွင်ရှိသောရန်ပုံခွင်းနှင့် မြို့လုံးချမ်းသာ အမြောက်ကြီး၂လက်ဖြင့် စတင် ပစ်ဲပီးနောက် ရှိသမျှ အမြောက်အားလုံး သတ်မှတ်ပေးထားရာ ပစ်မှတ်များသို့ပစ်ရမည်ဟု အမိန့်ပေးသည်။
၁၀နာရီထိုးလျှင် အစီအစဉ်အတိုင်း ပစ်ခတ်ရာ အင်္ဂလိပ်စစ်သင်္ဘောပေါ်မှလည်း တပြိုင်တည်း ပြန်လည် ပစ်ခတ်ကြသည်ဖြစ်သဖြင့် တမြို့လုံး မီးခိုး ဖုံးကာ လူလုံးပင်မမြင်အောင် ၃နာရီကြာခန့် အပြန်အလှန် ပစ်ခတ်ကြလေသည်။
နေ့လည် နာရီပြန် ၂ချက်ထိုးခန့် မီးခိုးပြယ်လျှင် သည်တချီ ထပ်ပစ်ပြီးမှ နေရာပြောင်းတိုက်မည်ဟု မိန့်တော်မူသည့်အတွက် ရှိသမျှ အမြောက်ကြီးငယ် လက်နက်မီးပေါက် အကုန်ဖြင့် ထပ်မံ ပစ်ကြပြန်သော် မြို့ကပစ်သောလက်နက် သင်္ဘောများသို့ များစွာထိမှန်လေသည်။
-သင်္ဘောကပစ်သော လက်နက်မှာ တောင်ခံနေသဖြင့် များစွာအထိအခိုက်မရှိလှပေ။
မှောင်ရီပြိုးသောအခါ မြို့ဝန်မင်းက သည်အခြေအနေတွင် များစွာ စိုးရိမ်ရန်မရှိ ယခုရပ်ဆိုင်းကြဦး နံက် စောစောမှာ ထပ်မံပစ်မည် ၀ယ်သားများ ကုန်းကြောင်းမှ တက်လာလျှင် ငါ့ကိုလျောက်ကြဟု မိန့်သဖြင့် အပစ်ရပ်လေသည်။
မြန်မာဖက်မှအမြောပ်များ အပစ်ရပ်နေစဉ် စစ်သင်္ဘောမှ အင်္ဂလိပ်စစ်သားအများ လှေသမ္မာန်များဖြင့်ကူးကာ ကမ်းတက်လေလျှင်လှေတထောင်တပ်ဗိုလ် မောင်ရှန်းဖြူတပ်နှင် ခုခံတိုက်ခြင်း မသာတခါးမှ မြန်မာစစ်သည်တို့ ပစ်ခတ်ခုခံခြင်းတို့ကြောင့် အင်္ဂလိပ်စစ်သားများ ရှေ့မတိုးနိုင် မြို့ရိုးကြား ပုန်းကွယ်ပစ်ခတ်နေရလေသည်။
သို့ရာတွင် ညနေပိုင်း တိုက်ပွဲခနအကြာ မိုးသီးထံစွာ ရွာသွန်းလေရာ မြန်မာတို့၏ အမြောက်ကြီးငယ် လက်နက်မီးပေါက်များ နားခွက်က မီးမကူးနိုင်ဖြစ်ကာ ပစ်မရသောကြောင့် အင်္ဂလိပ်စစ်သားများ အတင်းတက်ကြရာ မြန်မာတို့က ဓါးလှင်္ဖြင့် ထိုးခုတ်သဖြင် အင်္ဂလိပ်စစ်သားများ ၁၀၀ကျော် သေ
မြို့ဝန်မင်းကြားသော် လတ်တလောထပြီး ဦးမြတ်လေး သားမောင်မောင် ထားဗိုလ်မောင်လေးတို့ မသာတခါးသို့ပြေးသွားကာ ခုခံထိုးခုတ်ကြလေသည်။
သိမ်တော်ကြီးကုန်းပေါ်ရှိ ရန်ပုံခွင်းအမြောက်ကြီး လက်ကျိုးသဖြင့် ပစ်မရကြောင်း သတင်းပို့လျှင် တက်လာသမျှ ဂေါ်ရာကုလားတို့ကို ဓါးနှင့်သာခုတ်ကြဟု အမိန့်ပေးပြီး ကိုယ်တော်တိုင် ရွပ်ရွပ်ချွန်ချွန် တလစပ်ထိုးခုတ်လေသည်။
မြစ်ငယ်ရပ်မှ ဂေါ်ရာတပ်ရှုံးပီးဆုတ်လျှင် သွေးကြွနေသည့် မြန်မာစစ်သည်တချို့ မြစ်ငယ်တံတားထိ လိုက်ခုတ်လေသည်။
ထိုမှ အရှေ့ကျောင်းတောင် ခြေသို့ တက်လာသည့် အင်္ဂလိပ်စစ်သည် ၁၀၀၀ကို မြို့ဝန်မင်း ဦးမြတ်လေး ကိုယ်တိုင် စစ်ချီတိုက်ခိုက်ရာ အင်္ဂလိပ် ခေတ်မှီ လက်နက်များဒဏ်ကြောင့် များစွာသော မြန်မာစစ်သည်တို့ ကျဆုံးရလေသည်။
မြို့ဝန်မင်း ဦးမြတ်လေး ကိုယ်တိုင်တပ်ဦးမှာမားမားလျှပ်လျှပ် ရပ်ခိုင်ထိုးခုတ်ပါသော်လည်း ပြောင်းဝက ယမ်းလောင်း ထောင်းပီးကာမှ နခွက်ထိပ် ကက်ပိတ်လို့ ပစ်ရတဲ့သေနတ် မိုးမသည်းသည်သော်မှ ထိုခေတ်ပေါ် အင်္ဂလိပ် မောင်းထိုးသေနတ် ယှဉ်ကပ်ဖို့ မလွယ်လှသည် ဖြစ်ရာ ရဲမက်ပေါင်းများစွာ သေကြေဒဏ်ရာရသည်နှင့် မြို့ကိုခွာကာ ဆုတ်ရလေတော့သည်။
၁၁၈၆ခုနှစ် သီတင်းကျွတ်လဆန်း၁၄ရက်နေ့ မြို့ပျက်ပီး ၄ရက်အကြာ ဘိတ်တောင်အရပ်တွင် တိမ်းရှောင်နေသော မြို့ဝန်မင်း ဦးမြတ်လေးက မြို့သို့ဝင်မည် အကြောင်းကြားသဖြင့် အင်္ဂလိပ်ဗိုလ်၂ယောက် သွားပီး မြို့သို့ ဆောင်ခဲ့၏။
အမြောက်ဗိုလ် ရော်ရှင်နှင့် ဗရင်ဂျီဘာသာဝင် အမြောက်အမှုထမ်းများအား သင်္ဘောတွင်ချကာ အကျဉ်းထားသည်ကို ထိုသူတို့အပါအ၀င် ခံပစ်သူများအပေါင်းသည် ကျွနုပ်၏အမိန့်ဖြင့်သာလျှင် ခုခံသည်ဖြစ်သောကြောင့် ကျွနုပ်ကိုယ်တိုင် အင်္ဂလိပ်မင်း လက်သို့ ပါလာသည်တွင် ၄င်းလူအများကို အရေးမယူ လွတ်ပေးရန် ခုခံပြောဆိုသည့်အတွက် လွတ်ပေးကာ အမြောက်ဗိုလ် ရော်ရှင် အကောက်ဝန်မောင်ယောက် မြို့ဝန်မင်း ဦးမြတ်လေး မယား သားသမီးများပါအကျယ်ချုပ်နှင့် ယူသွားပြီး ဘင်္ဂလားတွင် ထားလေသည်။ နောင်တွင် မုတ္တမသို့ပြန်ခေါ်ကာ ပင်စင်ပေးပြီးထားလေသည်။
တနင်္သာရီတိုင်း-မြိတ်ရာဇ၀င် – ဦးကြီးစိန်
ကျနော် လွန်ခဲ့သော ၆နှစ်က -ကမ္ဘာမကြေ “မဲဆွယ်ခြင်း” သို့မဟုတ် မြန်မာပြည်တောင်ဖက်စွန်းက အလွမ်းကဗျာ အမည်ဖြင့် New7Wonders အဖွဲ့ က ပေးသည့်ဆု အတွက် မဲပေးကြရန် မြိတ်ကျွန်းစုအကြောင်း ပို့စ်တခုရေးဖူးရာ မိတ်ဆွေများက မြိတ်မြို့ဝန် ဦးမြတ်လေး အကြောင်းရေးရန် တိုက်တွန်း ကြပါသည်။ နောက်ပိုင်း မြိတ်နှင့် နွယ်သည့် အတိုအစလေးများရေးဖြစ်တိုင်း မြိတ်မြို့ဝန် ဦးမြတ်လေး အကြောင်းရေးရန် ပြောသူများနှင့် ကြုံရပါသည်။
ကျနော်ကလည်းရေးရန်ဆန္ဒရှိပါသည်။ ရေးရန် အကြောင်းအရာ အကိုးအကားတို့လည်း ရှိသင့်သလောက် ရှိပါသည်။ ပြောရလျင် အကြိမ်ကြိမ်လည်း ချရေးဖြစ်ဖူးပါသည်။
ရေးသည့်အခါ မိမိသုံးသပ်ချက်များ ပါနေသည်ကို မကြေလည်သောကြောင့် စာဖြစ်မလာတာ ဖြစ်ပါသည်။
ကျနော်သည် ထိုဒေသသားဖြစ်သောကြောင့် ဦးမြတ်လေးသည် ကျနော် မွေးရာပါပိုင်ဆိုင်သော ဟီးရိုး ဖြစ်သည်။
ငယ်စဉ်က ငယ်သည့်အလျောက် အရွယ်ရလာတော့ အရွယ်အသိအလျောက် ဦးမြတ်လေးသည် ကျနော်နှင့် ထာဝရ ရင်းနီးခဲ့သူဖြစ်သည်။
တကယ်တန်းချရေးသည့်အခါ သိမှတ် စုစပ်ထားသည်များ နှင့် ဇတ်ကြောင်းကို တည်ဆောက်သောအခါ ကျနော်သိသော ဦးမြတ်လေးသည်မြိတ်နယ်၏ အကြီးအမှူး သူ့မြို့ သူရွာ သူ့ပြည်သူများတိုင်းတပါးကျွန် အဖြစ် မခံနိုင်သော သတ္တိရှိသော ရဲရင့်ပြတ်သားသော သူရဲကောင်း ခေါင်းဆောင်ကောင်းတယောက် ဒါသည် ကျနော သိကြွမ်းမြတ်နိုးသော မြိတ်မြို့ဝန် ဦးမြတ်လေး၏ ဇတ်လမ်းဖြစ်သည်။ ကျူးကျော်လာသောနယ်ချဲ့ကို မျိုးချစ်ခေါင်းဆောငိကဦးဆောင်ပီး မျိုးချစ်ပြည်သူများ ပြန်တိုက်ကြသည် ပြန်ခုခံကြသည်။
စာချရေးသောအခါ ကျနော့တွင် ပေါ်ပေါ်လာသော အတွေးမှာ ၂မျိုးဖြစ်သည်။
မြို့ဝန်ဦးမြတ်လေး၏ မြိတ်တိုက်ပွဲသည် သာမန်မြို့ပြ အုပ်ချုပ်ရေးအရာရှိတဦး၏ လာတိုက်လို့ ပြန်တိုက်သောပွဲမျိုးမဟုတ်။ မြန်မာဘုရင်၏ အုပ်ချုပ်ရေး ယန္တရားသည်လင်္ညး မြည်ကာမတ္တ မဟုတ်။
အလွန်စည်းစနစ်ကျသော ပုံစံကျ အုပ်ချုပ်ပုံကို မျက်ဝါးထင်ထင် တွေ့မြင်ရသည်။
ဘုရင်က မြို့ဝန်သို့ စေသော အမိန့်စာချွန်တော်တွင် အင်္ဂလိပ်ကို ခုခံ တိုက်ရန် နန်းတော်က အဆုံးအဖြတ် ပါသည်။ အမြောက်ကြီး အမြောက်ငယ် ၆၄လုံး သေနတ် ၁၁၀၀ ကို
ဒေ၀ံတိုက်တော် (လက်နက်ရုံ) က ထုတ် ခွင့်ပါသည်။
မြန်မာ အစိုးရ ယန္တရားသည် လိုအပ်သလောက် လိုအပ်သည့် အတိုင်းအတာလောက်လိုအပ်သည့် အခြေအနေအလျောက် စနစ်ကျမှု မည်မျှရှိသည်ကို မြင်လာရသည်။
မြို့ဝန်ဦးမြတ်လေး၏ မြိတ်တိုက်ပွဲသည် သေနင်္ဂဗျူဟာ စစ်အင်္ဂါအပြည့်အစုံနှင့် စစ်ကို စနစ်တကျ အစီအစဉ်နှင့် တိုက်တာကို သုံးသပ်မိသည်။
ထို့အတူ (တနိုင်ငံလုံး) မြန်မာတို့ဖက်မှ တိုက်ခိုက်မှု တစုံလုံးကိုကြည့်လျှင်လည်း မြန်မာ့ သေနင်္ဂ ဗျူဟာ စစ်အင်္ဂါ အဆင့်အတန်းကိုတွေ့နိုင်သည်။
၁၈၂၄ ခုနှစ်၊ မေလ ၁၀ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန် ဆိပ်ကမ်းသို့ အင်္ဂလိပ် စစ်သင်္ဘောများ ရောက်လာသော အခါ၌ မြန်မာတို့သည်လုံးဝ အငိုက်ခံလိုက်ရခြင်းဖြစ်သည်။
အင်္ဂလိပ်တို့ ရန်ကုန်ကို အလွယ်ရသော်လည်း မြန်မာ စစ်မှူး စစ်ကဲတို့က ရန်ကုန် ပတ်လည်တွင် နေထိုင်သူ အားလုံးတို့ကို ရွှေ့ပြောင်းစေထားရာ လူသူ ဆိတ်သုဉ်း၍ တောကြီး မြက်မဲ ထဲတွင် စားနပ်ရိက္ခာနှင့် လမ်းပြများ၊ သတင်း ပေးပို့မည့်သူများ၊ သယ်ယူ ပို့ဆောင် ပေးမည့်သူများကို ရှာဖွေ မရနိုင် ဖြစ်လေတော့သည်။ မကြာမီ မိုးကျ၍ လာလေရာ ထိုနေရာမှ ထပ်မံ ရွေ့လျားနိုင်ခြင်း မရှိတော့ဘဲ မြန်မာတို့ လာရောက် တိုက်ခိုက်ခြင်းကိုသာ စောင့်ဆိုင်း၍ နေကြရလေသည်။
နောက် သုံးသပ်မိသည်က ထိုစစ်ပွဲသည် လုံးဝ မတရားသော ယုတ်မာသော ဗိုလ်ကျ အနိုင်အထက်ပြုသော အရင်းရှင် နယ်ချဲ့စစ် ဖြစ်သည်။
မြိတ်တိုက်ပွဲသည် မိုးမရွာလျှင်လည်းရှုံးမည်။ ပိုမိုကြီးမားသော ဆုံးရှုံမှုဖြင့် ရှုံးကိုရှုံးမည်ဖြစ်သည်။
ခြုံ၍ ကြည့်လျှင် မြန်မာမင်းတို့သည် အရည်အသွေး ရှိသူများ၊ အစွမ်းထက်သူများ ဖြစ်ကြသည်။ သို့သော် ပြင်ပ လောက အကြောင်းကို သတိမမူသူများ-ဘုန်းလက်ရုံး အင်အားကို လွန်စွာ အထင်ကြီးနေသူများ ဖြစ်ကြသည်။ ကမ္ဘာ့အခင်းအကျင်း အရွေ့ ခေတ် အကူး အပြောင်း ကိုနားမလည်လိုက်သဖြင့် အသိမ်းပိုက်ခံ ဘ၀ ရောက်ရခြင်းဖြစ်သည်။
ကျိုယ့်ထီးကိုယ့်နန်းသည် သီပေါမဟုတ်လဲ အလားတူဘဲဖြစ်မည်။
မြိတ်မြို့ဝန်သည် အင်္ဂလိပ် အင်အား အခြေအနေအရပ်ရပ်ကို လုံးဝမသိခဲ့။ ရေ၀န်ဖေါက်သောကြောင့်သာ ထားဝယ်ကျသည်ဟု ယုဆသဖြင့် ထားဝယ်သို့ တက်ပီး မောင်ဓါးကို နရင်းအုပ် အင်္ဂလိပ်ကို ဖင်ပိတ်ကန်ဖို့ ချီစေခြင်းဖြစ်သည်။
ထိုနည်းတူစွာ မဟာဗန္ဓုလသည်လည်း အင်္ဂလိပ် လက်နက်စွမ်းရည်ကို သူလိုငါလို လောက်သာ တွက်သည်။ အင်္ဂလိပ်ခံတပ်များဆီကို တဖြေးဖြေး ရှေ့သို့ တိုး၍ တရွေ့ရွေ့ ချဉ်းကပ် လာကြပြီးနောက် အလုံးအရင်းနှင့် တိုက်ခိုက်ကြသည်။
အင်္ဂလိပ်က ပစ်စွမ်း အကြီးအကျယ်ကွာနေရာ ရွေ့လျားနေသော မြန်မာတပ် နီးကပ်လာသော် အဆက်မပြတ် ပစ်ခတ်ကြပြီးလျှင် ပတ်ပတ်လည်ရှိ မြန်မာတို့၏ ခံတပ်များကို အဝေးမှပင် ပစ်ခတ် ဖြိုဖျက်လေသည်။
မင်းကြီး မဟာဗန္ဓုလသာ အခြေနေမှန်သိပါမူ မုတ်သုန်မိုး အပြင်းထန်ဆုံး ရွာသွန်းနေချိန်တွင် တပ်တော်ကြီး တခုလုံးနှင့် အမြောက် လက်နက်များနှင့်တကွ ရခိုင်ရိုးမကို အပြင်းချီတက် ဖြတ်ကျော်နိုင်စွမ်း တပ်ချီ တပ်ဆုတ် လျင်မြန်မှု အစွမ်းကိုသုံးကာ ရင်ဆိုင်စစ်မသုံး လျပ်တပျက်စစ်သာ သုံးမည်မလွဲဟု သုံးသတ်သည်။
သို့ဆိုလျှင်လက်နက်အင်အားသာမှုက အင်္ဂလိပ်တို့၏ စစ်ဆင်ရေး ညံ့ဖျင်းမှု တပ်စွဲပုံ စနစ်မကျမှုများကို ကာကွယ်နိုင်မည်မဟုတ်ဟုလည်း ယူဆသည်။
ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအတွက်နယ်ပါယ်ချဲ့သော ပဒေသရာစ် နယ်ချဲ့ခေတ်အကုန် အရင်းရှင်နယ်ချဲ့စနစ်အကူးမှာ မြန်မာပဒေသရာဇ်မျာ. ပွဲရပ်သွားရခြင်းဖြစ်သည်။
အင်္ဂလိပ်တို့မြန်မာနိုင်ငံကို ရန်စကျူးကျော်နယ်ချဲ့ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ၁၈၅၃ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင် ၃၀ ရက်က ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သော နယူးယောက် ဒေးလီး ထြီဗျုးန် သတင်းစာ အမှတ်စဉ်-၃၈၃၃ တွင်ရေးသားခဲ့သည့် ကားလ်မာ့က်စ်၏ ထိုစဉ်ကမြန်မာသံတမန်များ အိန္ဒိယသို့ ရောက်ရှိခဲ့ပြီး အင်္ဂလိပ်တို့နှင့် ဆွေးနွေးခြင်းသတင်းကို အခြေခံ၍ ရေးသားထားသည့် ဆောင်းပါးတခုတွင်-
အရှေ့တိုင်းတွင် ဗြိတိသျှတို့ ကျူးကျော်တိုက်ခိုက်ခဲ့မှုများအနက် မြန်မာနိုင်ငံကိုကျူးကျော်မှုလောက် အကျိုးအကြောင်းခိုင်လုံမှုအခြေခံကင်းမဲ့သောစစ်ပွဲမျိုးမရှိခဲ့။ ဗြိတိသျှပိုင်နယ်မြေများကို မြန်မာတို့က အနောက်မြောက်ဖက်မှဝင်ရောက်နိုင်သည်ဟု ဆိုနိုင်သော်ငြား ယင်းဖက်မှကျူးကျော်တိုက်ခိုက်လာနိုင်သည့် အန္တရာယ်မှာဖြစ်နိုင်ဖွယ်မရှိ။ဘင်္ဂလားနှင့် မြန်မာနိုင်ငံသည် တောင်တန်းကြီးများခြားနားနေပြီး ယင်းတို့ကိုမည်သည့်စစ်တပ်ကမျှ ကျော်လွှားချီတက် ၀င်ရောက်လာနိုင်မည်မဟုတ်။ အိန္ဒိယအစိုးရသည်လည်းမြန်မာနိုင်ငံကိုတိုက်ခိုက်လိုက ပင်လယ်လမ်းမှသာလျှင်မလွဲမသွေဝင်ရ မည်။ မြန်မာတို့ကရေကြောင်းမှကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာနိုင်သည်ဟူသည့်ပြောစကားများသည် ရယ်ဖွယ်ရာဖြစ်သကဲ့သို့၊ မြန်မာကမ်းခြေစောင့်တပ်များကဗြိတိသျှစစ်သင်္ဘောများကိုတိုက်ခိုက် ရန်ကြံစည်နေသည်ဟုဆိုခြင်းမှာလည်း မဖြစ်နိုင်သောအဆိုပင်ဖြစ်သည်။ ပဲခူးနယ်တစ်ဝိုက်ကို အမေရိကန်ယန်းကီးများက သိမ်းပိုက်ရန်ဆန္ဒပြင်းပြနေသည်ဟူသည့် လေလုံးများမှာလည်း မည်သည့်အထောက်အထားမျှမရှိ။ ဟုဖေါ်ပြခဲ့သည်။
လန်ဒန်၊ သောကြာနေ့၊ ဇူလိုင် ၁၅၊ ၁၈၅၃။
ကွန်မြူနစ်ကြေညာစာတန်းနှင့် အရင်းကြမ်းကို ရေးသားခဲ့သူ ။
Posted by U NU OF BURMA at 12/08/2015 07:54:00 AM0comments Links to this post
ပြည်တော်သာခေတ်ဟောင်းက ပြည်မြန်မာ (အပိုင်း ၁-၂)
လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ် ၃၀ လောက်က မဆလခေတ်မှာ အသက်နှစ်ဆယ်လောက်ရှိတဲ့ လူငယ်တစ်သိုက်ကို ပြည်တော်သာခေတ်က စာအုပ်စာတမ်းများကိုပြလိုက်မိတော့ အဲဒီအထဲမှာပါတဲ့ကုမ္ပဏီပစ္စည်း ကြော်ငြာ ဈေးနှုံးတွေကိုကြည့်ပြီး ၊ အစစရှားပါးနေတဲ့မဆလခေတ်နဲ့နှိုင်းယှဉ်ကာ “အကိုကြီးရယ်ဒါကျနော်တို့ ဗမာ ပြည်မှ ဟုတ်ရဲလား”လို့ သနားစရာမေးရှာပါတယ်။ မဆလခေတ် ဗမာပြည်ကလည်း အစစအရာရာမှာ ရှားပါးနေပြီး “ဘာမေးရှားနိုင်ငံ” ဖြစ်နေတော့ ပြည်တော်သာခေတ်က ဘာမဆိုဝယ်ချင်တာရနေပြီး၊ ဈေးတွေကလည်းပေါတော့ သူတို့ အတွက်က အံသြစရာကြီးဖြစ်နေတာပေါ့။
အခုခေတ်ဗမာပြည်ကလူငယ်တွေကို ပြည်တော်သာခေတ်က စာအုပ်တွေပြရင် ပစ္စည်းမျိုးစုံကတော့ ဗမာပြည်မှာလဲဝယ်လို့ ရနေပြီဖြစ်လို့ သိပ်အံသြမှာမဟုတ်ပေမဲ့ထမင်း အဝစား ပြား၅၀ ၊ ရန်ကုန်နဲ့ အင်းစိန် ဘတ်စ်ကားခ ၃၅ ပြား၊ မုန်းဟင်းခါး တစ်ပွဲ ၁၅ ပြား၊ အကြော်နဲ့ပြား ၂၀၊ ဘူးသီးကြော် တစ် ချပ် ၅ ပြား၊ ဒန်ပေါက်ထမင်း တစ်ပွဲ တစ်ကျပ်၊ ဘဲဥဆယ်လုံးတစ်ကျပ်၊ ဝက်သားတစ်ပိသ်သာ (‘သ’ ကြီးကို window 8.1 နဲ့ရေးမရလို့ ရတဲ့နည်းနဲ့ရေးရတာပါ) နှစ်ကျပ်၊ ကြက်သား သုံးကျပ်၊ စတဲ့ ရန်ကုန် ပေါက်ဈေးတွေ (နယ်တွေမှာဒီ့ထက်ပေါတယ်)ကိုမြင်လိုက်ရရင် သူတို့ ဘာပြောမလဲ မသိဘူး။
အစစအရာရာ ဈေးပေါနေတော့လည်း အဲဒီခေတ်ကလခအနည်းဆုံးဖြစ်တဲ့ တလ ၈၂ ကျပ်ဘဲရတဲ့မင်းစေ ဟာလည်း မိသားစုကို ဝအောင်ကျွေးနိုင်၊ ကလေးတွေကို ကျောင်းထားနိုင်ခဲ့ ပါတယ်။ သူတို့မိသားစုမှာ လဲရွှေတွဲလဲငွေတွဲလဲနဲ့ပါ။ ရွှေဈေးကလဲ အကောင်းဆုံး ပရပိုက်ခေါက်မှ အလေးချိန် တစ်ကျပ်သားကို ကျပ်ငွေနှစ်ရာဘဲပေးရပါတယ်။
လွတ်လပ်ရေးရပြီးစကကိုလိုနီခေတ်ကသုံးခဲ့တဲ့အိန္ဒိယသုံးငွေကိုဆက်သုံးရသေးတယ်။ ၃ပိုင်တစ်ပြား၊ ၄ ပြားတစ်ပဲ၊ ၁၆ပဲ (ဝါ) ၆၄ပြားတစ်ကျပ်ပေါ့။ အင်္ဂလိပ်လိုကတော့ ကုလားအခေါ်တွေကိုသုံပြီ3းPai one Paisa,4Paisa one Anna, 16 Annas or 64 Paisa one Rupee ပေါ့။ မြန်မာပြည်မှာ ကိုလိုနီခေတ် အစပိုင်းကသာ ပိုင်ကိုသုံးပေမဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ ပြား ဟာ အငယ်ဆုံးသုံးငွေပါ။ အိန္ဒိယမှာတော့ လူတွေဟာ ပိုဆင်းရဲကြလို့ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဖြစ်ချိန်အထိ ပိုင် ကိုသုံးနေခဲ့တယ်လို့ လူကြီးသူမတွေပြောတာ ကြားဖူးပါ ရဲ့။ လွတ်လပ်ရေးရပြီးပေမဲ့ ရန်ကုန်ဟာ ကုလားမြို့တစ်ပိုင်းဖြစ်နေတုန်းမို့ ကုလားတန်းမှာဈေးဝယ်ရင် ၆ ပြား (ဝါ) ၁ပဲ၂ပြားကို ကုလားလို “ဆတ်ပိုက်ဆား” (ဝါ)” ယေးအန်းနား ဒိုး ပိုက်ဆား”။ ၁ကျပ်ခွဲဆိုတာ ၁ ကျပ် ရှစ်ပဲမို့ ကုလားလို” ယေးရူပြားအတ်အန်းနား” ဆိုတာတွေကို အဲဒီခေတ်က ရန်ကုန်သူ၊ ရန်ုကုန်သား တွေတတ်ခဲ့ ကြတယ်။ အဲဒီစနစ်ဟာ လွတ်လပ်ရေးရပြီး ၁၉၅၃ခုထိရှိနေသေးတယ်။ ၁၉၅၃ ခုမှာမှ မြန်မာ ဘုရင်တွေ သုံးခဲ့တဲ့ ပြား ၁၀၀ တစ်ကျပ်စနစ်ပြန်သုံးနိုင်တာပါ။
လွတ်လပ်ရေးရပြီးစက လူဆွဲတဲ့လန်ချားတွေလဲရှိပါတယ်။ လန်ချားကုလားတွေဟာ ဂေါ်ရင်ဂျီကုလားတွေ ဆိုတော့ “ဒိုင်းနား၊ ဘားယား” (ညာဘက်ကွေ့၊ ဘယ်ဘက် ချိုး)၊ “ဟိုး” (ရပ်)၊ “ဂျောင်း” (သွား) စတဲ့ ဂေါ် ရင်ဂျီစကားလောက်တော့ ရန်ကုန်သူ၊ ရန်ုကုန်သားတွေတတ်ခဲ့ကြတယ်။ ၁၉၅၁ လောက်မှာ ဖဆပလ အစိုးရက လူဆွဲရတဲ့လန်ချားဟာ လူ့သိက္ခာညှိုးနွမ်းစေတဲ့ အလုပ်ဆိုပြီး လန်ချားတွေပိတ်လိုက်ပါတယ်။ ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပြီး တောနယ်တွေကစစ်ပြေးဒုက္ခသည်တွေ ရန်ကုန်ရောက်လာပြီး ကျူးကျော်ရပ်ကွက် တွေ၊ ကွက်သစ်တွေပေါ်လာတော့မှ ကုလားမြို့ဖြစ်နေခဲ့တဲ့ ရန်ကုန်ဟာ ဗမာမြို့ဖြစ်လာတာပါ။
၁၉၅၈ ခု ဖဆပလ နှစ်ချမ်းကွဲတော့ ဖဆပလ အမတ်အများစုက ဆွေ-ငြိမ်း အဖွဲ့ကိုထောက်ခံတယ်။ ဒါပေ မဲ့ ဦးနုက အတိုက်အခံ ပမညတနဲ့တခြားအဖွဲ့တွရဲ့အကူအညီနဲ့အနိုင်ရသွားတဲ့အခါမှာ ဦးကျော်ငြိမ်းက “ကိုကြီးနု အစိုးရတော့ လန်ချားကုလား ယန်ကနား အစိုးရ ဖြစ်သွားဘီ။ လက်ဝဲသမားဦးသိန်းဖေမြင့် “ဒိုင်းနား၊ ဘားယား”လုပ်သလို ဆွဲရမဲ့အစိုးရပါဘဲ” လို့ဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။ ကာတွန်းဆရာဦးအောင်ရှိန်ကလဲ မော်ဒန်ကာထွန်းမှာ စုံထောက်ဦးရှံစားက ဖိနပ်ချုပ်ကုလားအယောင်ဆောင်ပြီး စုံထောက်ခန်းမှာ ဗမာ ခေါင်းပေါင်းမချွတ်ပဲဖိနပ်တိုက်နေတော့ ဖိနပ်အတိုက်ခံသူက “အမယ်၊ဖိနပ်ချုပ်ကုလားကလဲ ဗမာခေါင်း ပေါင်းနဲ့ပါလား”လို့ပြောလိုက်ရာမှာ ဦးရှံစားက “ဟရေး အာကိုဂျီး၊ ယန်ကနား အချိုးရတောင် ရွှေးဖလား လားရောင်ဂေါင်းဘောင်းနဲ့မဟုတ်လား၊ ဖိနပ်ချုပ်ကုလားအပ္ပနားလဲ ဂေါင်းဘောင်းနဲ့မှခေတ်မီတာပေါ့ အာ ကိုဂျီးရဲ့” လို့ ကုလားသံနဲ့သရော်ခဲ့ပါတယ်။
ဖဆပလအစိုးရက တိုင်းပြည်တိုးတက်ဖို့ ပြည်တော်သာစီမံကိန်း လုပ်ပါတယ်။ ပြည်တော်သာစီမံကိန်း နဲ့ဆောက်တဲ့တိုက်တွေ၊ ကျောင်းတွေကို ပြည်တော်သာတိုက်၊ ပြည်တော်သာ ကျောင်းတွေလို့ခေါ်ပါ တယ်။ ဒီအဆောက်အဦးတွေ ဒီနေ့အထိအသုံးဝင်နေဆဲပါ။ ပြည်တော်သာစီမံကိန်း နဲ့ တင်သွင်းလာတဲ့ Land Rover ကားကိုလည်း ” ပြည်တော်သာဂျစ်”လို့ခေါ်ကြပါတယ်။ ပြည်တော်သာခေတ်ကလွတ်လပ် စွာရေးသားပြောဆိုပုံနှိပ်ခွင့်အနည်းဆုံး ၉၅ ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပေးထားတော့ အစိုးရ ကိုသရော်တဲ့ ကာ တွန်း၊ သရော်စာ၊ ပြက်လုံးတွေအများကြီးပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ အငြိမ့်ပွဲမှာ လူပြက်နှစ်ယောက်ဆရာနဲ့ တ ပည့်လုပ်ပြီး မြန်မာသင်ပုန်းကြီးဖတ်စာအခန်းမှာ”မာရှယ်တီးတိုးလာပြီ၊ တဲအိမ်တွေ ဖျက်ရမည်။ ဆင်းရဲ သားတွေဒုက္ခရောက်၏။ ဒါပေမဲ့ ပြည်တော်သာပါသည်”။ ” ပြည်တော်သာတိုက်တွေ ဆောက်ပြီးပြီ။ ဆင်းရဲသားတွေစောင့်အုန်း။ ငါတို့ဆွေမျိုးတွေအရင်ပေးမယ်။ ဒါပေမဲ့ ပြည်တော်သာပါ၏။ “လက်မှတ် ရောင်းအမျိုးသမီးတွေချော၏၊ သို့သော်ပြည်တော်သာဘတ်စကားရပ်မပေးပါ။ တက်စီ စီးစရာရာငွေမရှိပါ။ မာစီဒီးကားစီးသည့်ဝန်ကြီးများ ဤဒုက္ခကို သိမည်မဟုတ်။ ဒါပေမဲ့ ပြည်တော်သာပါသည်”။ ” ပြည်တော် သာကျောင်းတွေခန့်ညားသည်။ အခမဲ့ပညာရေးလည်းကောင်းပါ၏။ သို့သော်ဝန်ကြီးများ သားသမီးများ ကို ပြည်တော်သာကျောင်း၌ မထားကြပါ။ ဝန်ကြီးသားသမီးများ အင်္ဂလိပ်ကျောင်းတက်ကြပါသည်။ ဒါပေမဲ့ ပြည်တော်သာပါသည်” လို့ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း ဝေဖန်ရဲတဲ့ခေတ်ပါ။
ပြည်တော်သာနိုင်ငံခေတ်က စံပြအကျဉ်းထောင်တွေက အကျဉ်းသားတွေရဲ့ဘဝဟာလည်း မဆိုးပါဘူး။ ဆရာကြီးဒဂုန်ရွှေမျှားက ကိုလိုနီခေတ်ကထောင်တွေကို ပြည်တော်သာနိုင်ငံခေတ်ကစံပြထောင်တွေနှဲ့ ယှဉ်ပြကာ “မှတ်မိပါသေးတယ် ပြည်မြို့က အကျဉ်းထောင်ဝယ်” ခေါင်းစဉ်နဲ့ရေးခဲ့ပါတယ်။ နိုင်ငံရေး အချုပ်သားနဲ့အကျဉ်သားတွေဟာ အထူးတန်းရပါတယ်။ အထူးတန်းရတဲ့ရာဇဝတ်မှုနဲ့ထောင်ကျသူ ဟာ လည်း အလုပ်မလုပ်ရဘဲနေ့တိုင်းထမင်းကောင်းဟင်းကောင်းစားရတဲ့အပြင် ကူဖော်လောင်ဖက်အဖြစ် ရိုးရိုးတန်းကအကျဉ်သား တစ်ယောက်အနည်းဆုံးရပါတယ်။ ရိုးရိုးတန်းကအကျဉ်သားတွေကလည်း နေ့ တိုင်းထမင်းကောင်းဟင်းကောင်းစားရတော့ အထူးတန်းအကျဉ်သားတွေဆီမှာ ကူဖော်လောင်ဖက် အဖြစ်သွားချင်ကြပါတယ်။ လူထုဦးလှတို့ဗန်းမော်တင်အောင်တို့ အဖမ်းခံနေရဆဲမှာ စာအုပ်တွေရေးသား ထုတ်ဝေနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ နာမည်ကြီးနိုင်ငံရေးသမားတစ်ယောက်ဆိုရင်”ငါးဆွဲ”ခံထားရတုန်း(ပုဒ်မ ၅ နဲ့ အဖမ်းခံရတာကိုသုံးတဲ့ အဲဒီခေတ်ကဘန်းစကား) ၁၉၆၄ မှာဖျက်ပစ်လိုက်တဲ့ ရန်ကုန်ထောင်ထဲမှာ တစ် ယောက်ထဲအတွက်အိမ်ကလေးတစ်လုံး၊ ကူဖော်လောင်ဖက်အဖြစ် ရိုးရိုးတန်းကအကျဉ်သားက နှစ် ယောက်၊ သူ့ဇနီးကလဲမနက်ကတည်းက သူ့ဆီလာနေတာ တစ်ခါတစ်လေ ညလည်းမပြန်တော့ဘူး။ အစိုးရကလည်းဘာမှမပြောလို့သာထောင်အရာရှိတွေက မျက်စိတ်မှိတ်နေကြတာပေါ့။ ဒီနိုင်ငံရေးသမား ရဲ့ဇနီး သူ”ငါးဆွဲ”ခံထားရတုန်းဘဲ သူနဲ့ကိုယ်ဝန်ရှိပြီး ကလေးတစ်ယောက်မွေးတဲ့အထိ လွတ်လပ်ခဲ့ပါ တယ်။
ရိုးရိုးတန်းကအကျဉ်သားတွေကိုလည်း လက်သမားအတတ်၊ ဖိနပ်ချုပ်နည်း၊ စာအုပ်ချုပ်နည်း။ ဂဟေ ဆော်နည်း၊ ဥယျာဉ်လုပ်နည်း၊ ဆပ်ပြာချက်အတတ် စတာတွေသင်ပေးပါတယ်။ အကျဉ်းသားတွေ ထဲက လေ့လာလိုသူတွေ ဗုဒ္ဓဘာသာစာပေ လေ့လာနိုင်စေရန် ရဟန်းတော်များ (အကျဉ်းသူတွေအတွက် သီလ ရှင်များ) ကို တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်း စံပြထောင်တွေထဲသွားပြီးသင်ကြားစေပါတယ်။ မင်္ဂလာစာမေးပွဲတွေ ကျင်း ပပြီး အောင်မြင်သူကို ကျခံနေရတဲ့ထောင်ဒါဏ်ထဲက လျှော့ရက်တွေပေးပါတယ်။ အခြားဘာသာဝင် အကျဉ်းသားတွေအတွက်လဲ ခရစ်ယာန်ဘုန်းကြီး၊ သင်းအုပ်ဆရာ၊ မော်လဝီ၊ ဆွာမိကြီး စသူတွေ စံပြ ထောင်တွေထဲသွားပြီး သက်ဆိုင်ရာဘာသာအလိုက် ဟောပြောခွင့်၊ ဝတ်ပြုခွင့်တွေပေးပါတယ်။
ဦးနုဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာကို အလွန်ကိုင်းရှိုင်းသူဖြစ်ပြီး နိဗ္ဗာန်ရောက်ရေးမှာတောင် ရဟန္တာအဖြစ်နဲ့ မရောက် လိုပဲ ဘုရားဆုပန်ထားသူဖြစ်တယ်လို့ တရားဝင်ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သူပါ။ သားငါးမစားပဲ သက်သတ် လွတ်စားသူ၊ အရက်မသောက်သူလို့လည်း သတင်းကြီးပါတယ်။ ဦးနုဟာ သာသနာ့ဒါယကာဖြစ်လိုတာ ကြောင့် ဆဋ္ဌသင်္ဃာယနာတင်ပါတယ်။ စုစုပေါင်း အဲဒီခေတ်ကကျပ်ငွေတစ်ကုဋေ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ နှစ်သန်း) ကုန်လို့ ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်နေဆဲမှာ ငွေဖြုန်းတယ်လို့ဝေဖန်သူတွေရှိခဲ့ပေမဲ့ လူများစု ဗုဒ္ဓဘာသာ ဝင်ရဟန်းရှင်လူတွေကတော့ သာဓုသုံးကြိမ်ခေါ်ပြီးထောက်ခံကြပါတယ်။
မြန်မာပြည်ဟာ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး နိုင်ငံဖြစ်လို့ကျွဲနွားလိုတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြပြီး ကျွဲနွားသတ်ခွင့်၊ အမဲသားရောင်းခွင့်တို့ကို တရားဝင်ပိတ် ပင်ထားပါတယ်။ နှစ်စဉ် မူဆလင်ဗက္ကရီးအစ်ရောက်ခါနီးမှာ မူဆလင်တွေကလဲနွားသတ်ချင်၊ ဦးနုက လည်း သူ့အနေနဲ့ သတ္တဝါတွေကိုသတ်ပြီးပူဇော်တာကို ခွင့်မပြု လိုပေမဲ့ ဘာသာရေးပွဲတော်ဖြစ်လို့ ခွင့်ပြုပါမယ်။ ဒါပေမဲ့ ဗက္ကရီးဆိုတာ ကုလားစကားမှာ ဆိတ်ကိုခေါ် တာဖြစ်လို့ ဆိတ်ကိုသာသတ်ပြီးပူဇော်ကြပါ၊ နွားကိုတော့ မသတ်ကြပါနဲ့လိုတောင်းပန်၊ သူ့ကဲဘိနက် ထဲကဝန်ကြီး ဦးရာရှစ်နဲ့ ဦးခင်မောင်လတ် ခေါ် အဗ္ဗဒူလတစ် အပါအဝင်မူဆလင်တွေကလဲနွားကိုသာ သတ်ချင်ကြတာကြောင့် တစ်ကြိမ်မှာ ဦးနုဟာ အစာငတ်ခံဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာနှစ်ဘက်ညှိနှိုင်း ကြကာ လူဦးရေအလိုက် နွားကောင်ရေ ခွဲတမ်းချပေးပြီး သက်ဆိုင်ရာဗလီထဲမှာသာသတ်ကြရန်၊ အခြား ဘာသာဝင်များ စိတ်အနှောက်အယှက် မဖြစ်စေရန် နွားတွေကို မြို့ထဲမှာ ကြိုးနဲ့ဆွဲပြီး မသွားကြဖို့၊ သွေး ပေနေတဲ့ အဝတ်အစားနဲ့ မြို့ထဲမှာ မသွားကြဖို့တွေ သဘောတူကြပါတယ်။
၁၉၅၅ ခုလောက်မှာ ဦးနုအစိုးရက ပြည်တော်သာစီမံကိန်းနဲ့ ဟန်ဂရီနိုင်ငံက Ikarus ဘတ်စကားကြီးတွေ တင်သွင်းပါတယ်။ ဂျပန်ကလည်း Hino နဲ့ Isuzu ဘတ်စကားကြီးတွေရောက်လာပါတယ်။ အဲဒီဘတ်စ ကားကြီးတွေကို ပြည်တော်သာကားလို့ခေါ်ပါတယ်။ ပြည်တော်သာကားတွေမှာ ယူနီဖောင်းဝတ် လက် မှတ်ရောင်းအမျိုးသမီးတွေစခန့်ပါတယ်။ တစ်ကားမှာနှစ်ယောက်စီပါပါတယ်။ ကားရှေ့ပေါက်က အတက် ဖြစ်ပြီးနောက်ပေါက်က ဆင်းရပါတယ်။ မောင်းသူ၊ရောင်းသူ၊ စီးသူအားလုံးစည်းကမ်းရှိကြပြီးကားကြီးတွေ ကလည်း သန့်ရှင်းကြပါတယ်။ အဲဒီခေတ်က”စပယ်ယာမ” လို့ မခေါ်ဘဲ “လက်မှတ်ရောင်းအမျိုးသမီး” လို့ သာခေါ်ကြပါတယ်။ ဘတ်စကားတွေမှာနံပါတ်မတတ်သေးပါဘူး။ ရုပ်ပုံတံဆိပ်တွေနဲ့ပါ။ ဗမာစာမတတ်သူ တွေအတွက်ပိုအဆင်ပြေပါတယ်။ ရွက်လှေတံဆိပ်နဲ့ကားက ကြည့်မြင်တိုင်ဆိပ်ကမ်းက ပုစွန်ထောင်ဆိပ် ကမ်းကိုအသွားအပြန်ဆွဲတဲ့လိုင်းပါ။” တောင်ပံကား” က သိမ်ကြီးဈေးနဲ့အင်းစိန် အသွားအပြန်လိုင်းပါ။ အင်းစိန်မော်တော်ယာဉ်ရုံးတံဆိပ်ကဗြဟ္မာရုပ်ပါ။ မီးရထားတံဆိပ်နဲ့ကားက ရန်ကုန်ဘူတာကြီး (ကွမ်းခြံ ဘူတာ)ကိုရောက်ပါတယ်။ ၁၉၅၉ ခုနှစ် အိမ်စောင့်အစိုးရခေတ်မှာ အရုပ်နဲ့ဘတ်စကားလိုင်းတွေကို နံပတ်နဲ့ပြောင်းလိုက်ရာမှာ မြင်းဖြူ၊ မြင်းနီ၊ မြင်းကျားတို့က နံပတ် ၁ ၊ ၂ ၊ ၃ ဖြစ်သွားပြီး မီးရထားတံဆိပ် က နံပတ် ၄ ၊ ဆင်ဖြူ နဲ့ ဆင်မဲက ၅ နဲ့ ၆၊ နဂါးက ၇၊ တောင်ပံကား က ၈၊ ကြံ့ က ၉၊ ကျန်တဲ့ ညောင်ပင်၊ လေယာဉ်ပျံ၊ ခြင်္သေ့၊ ရွက်လှေ စတာတွေလည်း နံပတ်နဲ့ဖြစ်သွားပါတယ်။ စုစုပေါင်း ၁၅လိုင်း ရှိပါတယ်။ နံပါတ် ၁၆လိုင်းက ၁၉၆၀ လောက်မှပေါ်လာတာပါ။ ကမာရွတ်လှည်းတန်းဈေးက ဆင်မလိုက်၊ ကြည့်မြင် တိုင်၊ မြေနီကုန်း၊ ရွှေဂုံတိုင်တို့ကိုပတ်ပြီး တာမွေအထိသွားတဲ့ နံပတ် ၁၆ လိုင်းကတော့ ဘတ်စကားပုံ မဟုတ်ဘဲ လူ၁၆ယောက်သာဆန့်တဲ့ ဂျပန်လုပ် ဒတ်ဆန်း လိုက်ထရပ်လေးတွေပါ။
ဘတ်စ်ကားကျပ် တယ်ဆိုတာ ဘယ်လိုဟာလဲလို့ မေးယူရမည့်ခေတ်ပါ။ ဘတ်စ်ကားစပယ်ယာတွေကလဲ ယဉ်ကျေးကြပါတယ်။ အစ်ကို၊ အစ်မ၊ ညီလေး၊ ညီမလေး၊ ဦးလေး၊ ဒေါ်ဒေါ် သင့်တော်သလိုခေါ်ပြီး “လာပါခင်ဗျ၊၊ ကားချောင်ပါတယ်ခင်ဗျ၊၊ စိန်အောင်မင်းတောင်ဝင်ကနိုင်လောက်အောင်နေရာရှိပါတယ် ခင်ဗျ၊” လို့အော်ခေါ်လေ့ရှိပါတယ်။
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်နားကဖြတ်သွားတဲ့ဘတ်စ်ကားလိုင်းတွေ၊ နဂါးရုပ် (နောင် နံပါတ် ၇ လိုင်း)၊ တောင်ပံ ကားရုပ် (နောင် နံပါတ် ၈ ) ၊ ကြံ့ရုပ် (နောင် နံပါတ် ၉ ) စတဲ့လိုင်းတွေက ကားစပယ်ယာတွေဟာ ပိုပြီး ယဉ်ကျေးကြပါတယ်။ သူတို့ပြောလေ့ရှိတာက “ကျနော်တို့ ဟာ နောင်တခေတ်မှာ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်မဲ့ 
တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေနဲ့ ဆက်ဆံနေရတာဆိုတော့ အထူးပိုပြီး ယဉ်ကျေးရပါမယ်” လို့ ပြောလေ့ရှိပါတယ်။သူတို့ ပြောတာလည်း မှန်ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်က နိုင်ငံခေါင်းဆောင်ဖြစ်နေတဲ့ ဦးနုတို့ ဦးကျော်ငြိမ်းတို့၊ အ တိုက်အခံခေါင်းဆောင်ဖြစ်နေတဲ့ ဦးသိန်းဖေမြင့်တို့ဟာလည်း တက္ကသိုလ်ကျောင်း သားဟောင်းတွေပါ။ ဒါကြောင့်လဲ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်နားကိုဖြတ်သွားတဲ့ ကားလိုင်းတွေက ယာဉ်မောင်း သူတွေ ၊ လက်မှတ်ရောင်းသူတွေက “ငါတို့ ဟာ ဗမာပြည်ရဲ့ခေါင်းဆောင်လောင်းတွေကို အကြို အပို့လုပ်နေရတာ” ဆိုပြီး တခြားလိုင်းတွေက ယာဉ်မောင်း ၊ လက်မှတ်ရောင်းတွေ အပေါ်မှာဂုဏ်ယူပြီး ပြောလေ့ရှိပါတယ်။
တကယ်လည်း မှန်ပါတယ်။ အဲဒီခေတ်က တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေကို လူတကာကလေးစားကြပါ တယ်။ စာရေးဆရာတက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင်က သူ့ ဝတ္တု တစ်ခုထဲမှာ ၁၉၄၉ ခု နှစ် ရန်ကုန်ကို သူပုန်တွေဝိုင်း ထားတုန်း တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေ အစိုးရတပ်ထဲဝင်ပြီး သူပုန်တွေကို တိုက်ဖို့လုပ်ရာမှာ အစိုးရစစ် သားတွေက “ညီလေးတို့ နောက်တန်းမှာဘဲနေပါ၊ သေစရာရှိရင် ဒို့ အရင်အသေခံပါမယ်၊ ညီလေးတို့ က တစ်နေ့မှာတိုင်းပြည်ခေါင်းဆောင်လုပ်ရမဲ့လူတွေပါ၊ ဒို့ စစ်သားတွေဆိုတာ စစ်ပွဲမှာသေတာမဆန်းဘူး၊ ညီလေးတို့ အသက်က တိုင်းပြည်အတွက် တန်ဖိုးရှိပါတယ်လို့ တကဲ့စစ်သားစိတ်ဓါတ်နဲ့ ပြောခဲ့ဖူးကြောင်း အတိအကျရေးထားခဲ့ပါတယ်။ ဝန်ကြီးချုပ်ဦးနုရဲ့ လူထုအောင်သံပြဇာတ်ထဲမှာလဲ “တကဲ့စစ်သားဆိုတာ စည်းစိမ်ခံဖို့မလိုဘူး၊ ဝီစကီကို သောက်ပြီးစည်းစိမ်ခံချင်တဲ့သူဟာ တကဲ့စစ်သားမဟုတ်ဘူး၊ ဝီစကီကို သောက်ပြီး မှိန်းနေတဲ့ သင်းထားတဲ့နွားနဲ့ ဘာမှ မထူးဘူး” ဆိုပြီး တကဲ့စစ်သားဝါဒကို ထုတ်ဖေါ်ပြခဲ့ ပါတယ်။
ကိုလိုနီခေတ်ပညာရေးကို ကျွန်ပညာရေးလို့ ခေါ်ခေါ် ဘာဘဲခေါ်ခေါ် ပညာရေးမှာ ကမ္ဘာ့အဆင့်ကို ကောင်းကောင်း မီခဲ့ဖူးပါတယ်။ ကိုလိုနီခေတ်က ဘွဲ့ ရခဲ့သူများဟာ လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက် ရန်ကုန် တက္ကသိုလ်မှာဆရာများ ဖြစ်လာခဲ့ကြတယ်။ ၎င်းဆရာများရဲ့ သင်ကြားပေးခြင်း ခံခဲ့ရတဲ့ တပည့်များလဲ ကမ္ဘာ့အဆင့်ကို မီခဲ့ကြတယ်။ ဦးနု အစိုးရက အင်္ဂလန်၊ အမေရိကန်၊ ကနေဒါ၊ သြစတြေးလျ စတဲ့နိုင် ငံတွေကို ပညာတော်သင်များ စေလွှတ်တယ်။ ပညာတော်သင်များ ရဲ့ ၉၉ ရာခိုင်နှုန်းကလဲ အမိနိုင်ငံကို ပြန်လာပြီး ကျရာတာဝန်များကို ထမ်းရွက်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့်ပညာရေးအဆင့်အတန်းကလည်းမြင့်ပါ တယ်။ စာမေးပွဲတွေမှာ မတတ်ဘဲနဲ့မအောင်ပါဘူး။ အထူးသဖြင့် ၁၀တန်းစာမေးပွဲလို့ခေါ်တဲ့ တန်းမြင့် ကျောင်းထွက်နှင့်တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲမှာ အောင်သူ ၁၀% တောင်မရှိခဲ့ပါဘူး။ ၁၉၅၉ ခုနှစ်က ၃.၄% ဘဲရှိပါတယ်။ တရာဖြေမှ လေးယောက်တောင်မအောင်ခဲ့ပါဘူး။ အဲဒီနှစ်မှာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ သားကြီးသြရသ အောင်ဆန်းဦးကဂုဏ်ထူးနှစ်ခုနဲ့အောင်ခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရဲ့ အဆင့်ကလည်း ကမ္ဘာအဆင့်မီခဲ့ပါတယ်။ အာဖရိကတိုက်ကတချို့ကျောင်းသားတွေ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာလာတက်ခဲ့ရ ပါတယ်။
ပညာရေးစနစ်မှာလဲ နိုင်ငံပိုင်ကျောင်းများသာမက အလွတ်ပညာသင်ကျောင်းများ၊ ခရစ်ယန် သာသနာပြု ကျောင်းများပါရှိလို့ကိုယ်ကြိုက်ရာကျောင်းမှာ သင်ကြားနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း အောင်ရင် တက္ကသိုလ်မှာ ကိုယ်ကြိုက်ရာ ၀ါသနာပါရာ ဘာသာရပ်ကို ရွေးချယ်ခွင့်ရှိပါတယ်။ ကိုယ်စိတ်မ၀င်စားတဲ့ ဘာသာရပ်ကို အတင်းသင်ယူရခြင်းမရှိပါ။ စာတော်သူအများစုကလဲ ကိုယ်စိတ်မပါရင် ဆရာဝန်၊ အင်ဂျင် နီယာ ဘာသာရပ်များကို မသင်ကြဘဲ Honours ခေါ် ဂုဏ်ထူးတန်းကို ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်ဘာသာရပ်နဲ့ တက်ရောက်သင်ကြားကြပါတယ်။ ဝိဇ္ဇာပညာရပ်များ သင်ကြားသူများလဲ ဂုဏ်မငယ်ကြပါ။ ဆေးပညာ အင်ဂျင်နီယာအတတ်တို့မှာလဲတကယ်စိတ်ပါသူများသာတက်ရောက်ဘွဲ့ ယူခဲ့ကြပြီး တကယ်တတ်သူက တတ်လိုသူကို ပညာသင်ပေးတဲ့ ခေတ်နဲ့စနစ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဆက်စပ်လို့ရယ်စရာတစ်ခုပြောရရင် ၁၉၅၉ ခုနှစ်မှာ တိဘက်ပြည်ကို တရုတ်ဝင်သိမ်းတယ်။ တိဘက် ရဟန်းမင်းကြီး ဒလိုင်းလားမား အိန္ဒိယကို ထွက်ပြေးရတယ်။ မြန်မာသတင်းစာတွေက တိဘက်ရဟန်း မင်းကြီး ဒလိုင်းလားမားကို “ခေတ်သစ်တရုတ်ပြေးမင်း” လို့ ရေးကြတယ်။ အဲဒီနှစ်မှာဘဲ သမိုင်းစာမေးပွဲ မှာ “တရုတ်ပြေးမင်း၏ဘွဲ့ အမည်ကိုရေးပါ” ဆိုတဲ့ မေးခွန်းပါလာတယ်။ အဖြေမှန်ကတော့ နရသီဟပတေ့ ပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ခပ်နောက်နောက်ကျောင်းသားတစ်ယောက်က “မေးခွန်းမှာ မရှင်းပါ၊ မတိကျပါ။ ပုဂံခေတ် က တရုတ်ပြေးမင်းဆိုလျှင်နရသီဟပတေ့ဖြစ်ပါသည်။ ယခုလက်ရှိ တရုတ်ပြေးမင်းဆိုလျှင် တိဘက် ရဟန်းမင်းကြီး ဒလိုင်းလားမားဖြစ်ပါသည်။ ၁၉၄၉ ခုနှစ်ကတရုတ်ပြေးမင်းဆိုလျှင် တရုပ်ဖြူ ချန်ကေရှိတ် ပါ” လို့ဖြေလိုက်ပါတယ်။ ဆရာတွေက သူ့ကို စိတ်မဆိုးဘဲ “အသေချာစဉ်းစားနိုင်ပါပေတယ်၊ တော်ပါပေ တယ်” လို့ ချီးမွမ်းကြပါတယ်။
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်နဲ့မန္တလေးတက္ကသိုလ်တို့ဟာ ပညာရေးဝန်ကြီးရဲ့အောက်မှာမရှိဘဲ ကိုယ်ပိုင် အက် ဥပဒေတွေအရ တက္ကသိုလ်ဆီးနိတ်အဖွဲ့နဲ့တက္ကသိုလ် ကောင်စီတို့ကအုပ်ချုပ်ပါတယ်။ တက္ကသိုလ် ကောင်စီမှာကျောင်းသားကိုယ်စားလှယ်နှစ်ယောက်ပါပါတယ်။ ကိုယ်စားလှယ်နှစ်ယောက်ကို ကျောင်း သားတွေကမဲပေးစံနစ်နဲ့ရွေးချယ်ရပါတယ်။ ဝန်ကြီးချုပ်ဟာ မူအရ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အဓိပတိ၊ ဒု ဝန်ကြီး ချုပ်ဟာ မူအရ မန္တလေးတက္ကသိုလ်အဓိပတိဖြစ်ပေမဲ့ ပညာရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေးကိစ္စတွေမှာ ဝင်စွက်လေ့ မရှိပါ။
ကျောင်းသားဆန္ဒပြပွဲများ မကြာခဏဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိပေမဲ့ ဘယ်အာဏာပိုင်ပုဂ္ဂိုလ်ကမှ တိုင်းပြည်နောင်ရေး ဒုက္ခပေးမဲ့ ဘုန်းဘောလအော အအောင်ပေးတဲ့စနစ်၊ ကျောင်းသားအချင်းချင်း သွေးကွဲစေမဲ့စနစ်၊ ကျောင်းသားများ မဆူပူပြီးရော အစိုးရဆန့်ကျင်ရေးလုပ်တာကလွဲပြီး ကျန်ကိစ္စများကို ကြိုက်သလိုလုပ် ထားခွင့်၊ ဥပမာ ကျောင်းဆောင်များထဲ ဖဲရိုက်။ အရက်သောက်။ မူးယစ်ဆေးဝါး သုံးစွဲတာကို လျစ်လျူပြု ထားခြင်း စတာမျိုး ခွင့်မပြုခဲ့ကြပါဘူး။
လွတ်လပ်ရေးရပြီး ပြည်တော်သာခေတ်မှာလွတ်လပ်စွာရေးသားပြောဆိုပုံနှိပ်ခွင့်အနည်းဆုံး ၉၅% လောက်ပေးထားတဲ့အချိန်မို့ ရန်ကုန်သင်္ကြံမှာ မီးသတ်ပိုက်များသုံးပြီး အကြမ်းပတမ်း ရေပက်ခြင်း၊ နိုင်ငံရေးမကျေနပ်မှုများ ကို သရုပ်ဖေါ်ပြခြင်း၊ သံချပ်ထိုးခြင်းစတာတွေ ခေတ်စားလာပါတယ်။ ရေပက်အကြမ်း ဆုံးနေရာများကတော့ စမ်းချောင်း၊ ရှမ်းလမ်း (ယခုအခေါ် ဗဟိုလမ်း) ရှိ “နေဗီကွာတား” ခေါ် ရေတပ် အရာရှိများရိပ်သာ၊ ဦးဝိစာရလမ်းနဲ့ ပြည်လမ်းကြားရှိ ယခုခေတ် ပြည်သူ့ဥယျာဉ်ဖြစ်နေတဲ့ ပြည်ထောင်စု စစ်ရဲတပ်ဌာနချုပ်၊ ၀င်ဆာလမ်း ယခုယုဇနပလာဇာ နေရာမှာရှိခဲ့တဲ့ နေပြည်တော်စစ်ဌာနချုပ်တို့ ဖြစ်ပါ တယ်။
“မီးသတ်ပိုက်ကြီးစက်ကုန်တင် လူသတ်ပွဲပင်ထင်လောက် ပါရဲ့”ဆိုတဲ့သံချပ်တွေ ခေတ်စားလာပါ တယ်။ စစ်ဌာနချုပ်တွေရှေ့မှာ ၀န်ကြီးချုပ်ဦးနုရဲ့ “လူထုအောင်သံပြဇာတ်”ကို ရုပ်ရှင်ရိုက်ရာမှ ခေတ်စား သွားတဲ့ “ဗိုလ်ကြီးရယ် ကျွန်မနွားကလေးကိုတော့ ပြန်ပေးခဲ့ပါရှင့်”ဆိုတဲ့စကားနဲ့သရော်လေ့ရှိကြပါတယ်။ “ပုလိပ် တစ်မတ်၊ ပြူစောထီး ငါးမူး၊ ယူအမ်ပီ သုံးမတ်၊ အာမီ တစ်ကျပ်၊ ဂိတ်ကြေးသတ်” ဆိုတဲ့သံချပ်နဲ့ လဲ အော်ကြ သရော်ကြပါတယ်။ ရေတပ်အရာရှိများရိပ်သာရှေ့မှာ “အမဲသားနဲ့အာလူး၊ အာလူးနဲ့အမဲ သား နေ့တိုင်းစားရတဲ့ စံပန်ဝါလား (သမ္ဗာန်သမား)တွေ” ဆိုတဲ့သံချပ်ဟာ ရေတပ်သားများ အထိအနာ ဆုံးသံချပ် ဖြစ်ပါတယ်။ ရန်ကုန် တရုတ်တန်းနဲ့ဘင်္ဂါလီစုတို့မှာ ညစ်ပတ်သူများက မြောင်းပုတ်ရေနဲ့ပက် လေ့ရှိလို့ “တစ်ကိုယ်လုံးနံစော်ချင်ရင် ဘင်္ဂါလီစုကိုသွားကြစို့ရဲ့၊ ရေပုပ်နဲ့အပက်ခံချင်ရင် တရုတ်တန်း ကို သွားလိုက်ကြဟဲ့” ဟု သံချပ်ထိုးကြပါတယ်။
ရန်ကုန်မြို့တော်ခန်းမရှေ့ရှိ မြို့တော်ဝန်မဏ္ဍပ်မှာ ၀န်ကြီးချုပ်ဦးနုနဲ့ ၀န်ကြီးများ တစ်ခါတစ်ရံ နိုင်ငံတော် သမ္မတကြီး ဒေါက်တာဘဦးပါ ပါဝင်ရေကစားပြီး သပြေခက်ဖြင့် ရေပက်ခြင်း၊ အလွန်ဆုံး ငွေဖလားဖြင့် ရေပက်ခြင်းတို့သာရှိပါတယ်။ ပိုက်ဖြင့်ပက်လေ့မရှိပါဘူး။
အဲဒီအချိန်က ရန်ကုန်မြို့မှာ မီးပျက်တယ်ဆိုတာ ဘယ်လိုဟာလဲလို့ မေးယူရမည့်ခေတ်ပါ။ ညမှာ အိမ် တွေဟာမီးချောင်းတွေနဲ့ ထိန်လင်းနေပြီး လမ်းတွေကလည်း မာကျူရီမီးတွေ ထိန်ထိန်ညီးပြီး အပ်ကျ ရင်တောင် ကောက်လို့ရတယ်လို့ပြောနိုင်တဲ့ခေတ်ပါ။ သူခိုးဓားပြကလည်းနည်းပါတယ်။ တခါတလေ အဖော်တွေနဲ့ ည ၉ နာရီခွဲပွဲ ရုပ်ရှင်ဝင်ကြည့်ပြီး သန်းခေါင်ကျော်မှာ အိမ်ကို ညလေတဖြူးဖြူး နဲ့လမ်း လျှောက်ပြန်ရတာ အရသာတမျိုးပါဘဲ။
ရန်ကုန်မှာ ညကျောင်းတွေလည်း အများကြီးပါ။ နေ့မှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့သူတွေဟာ မီးချောင်းတွေနဲ့ ထိန်လင်းနေတဲ့ညကျောင်းတွေမှာ ကျောင်းတက်နိုင်ပါတယ်။ ရန်ကုန်မှာ ညဈေးတန်းလဲ ရှိပါတယ်။ ည ၆ နာရီမှ ၁၀ နာရီအထိဖွင့်ပါတယ်။ အစားအစာ က အစ အဝတ်အထည်အလယ် ကားနဲ့ လျှပ်စစ်ပစ္စည်း အဆုံးအားလုံးကို ညဈေးတန်းမှာ ဈေးချို ချို နဲ့ရနိုင်ပါတယ်။
ရန်ကုန်မှာရေတော့ မကြာမကြာပျက်တတ်ပါတယ်။ ရန်ကုန်ကို လှော်ကားကန်၊ သာဓုကန် နဲ့ဂျိုးဖြူကန် တို့က သောက်သုံးရေပို့ပေးပါတယ်။ ဂျိုးဖြူ ကန်ဟာ ရန်ကုန်နဲ့ မိုင် ၅၀ လောက်ဝေးတော့ လူတစ်ရပ် အမြင့်ကျော် အချင်း ၇ ပေလောက်ရှိတဲ့ရေပိုက်လုံးကြီးတွေနဲ့ရေပို့ ပါတယ်။ အဲဒီပိုက်လုံးကို သောင်းကျန်း သူတွေက မကြာခဏမိုင်းခွဲဖျက်ဆီးတတ်ပါတယ်။ မိုင်းခွဲလိုက်ရင် ရန်ကုန်မှာ ရေမလောက်တော့ဘဲ အင်မတန်ဒုက္ခရောက်ကြပါတယ်။ အစိုးရဝန်ကြီးများနေတဲ့ဝင်ဒါမီယာ၊ အရာရှိကြီးများနေတဲ့ပြည်ထောင် စုရိပ်သာနဲ့ အခြားအစိုးရဌာနများ ဖြစ်တဲ့ မီးရထား ၊ စစ်တပ်၊ စစ်ရဲ ၊ ရဲ ၊ အကျဉ်းထောင် စတဲ့ဌာနတွေမှာ တော့ ကိုယ်ပိုင်အဝီစိတွင်းတွေနဲ့ရေစုပ်စက်၊ ရေပေးစက်တွေရှိလို့ ဂျိုးဖြူရေကိုမသုံးတာကြောင့် သူတို့ တော့ ဒုက္ခမရောက်ဘဲ သာမာန်ပြည်သူပြည်သားတွေဘဲ ဒုက္ခရောက်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့်လည်း သောင်းကျန်းသူတွေဆန့်ကျင်ရေးအစိုးရရဲ့ဝါဒဖြန့်မှုဟာ ပိုပြီးအောင်မြင်သွားပါတယ်။ လူစီးရထားတွေကို မိုင်းဗုံးခွဲတာ၊ ခရီးသည်တင်ကားတွေကို ဓားပြတိုက်တာ၊ လူသတ်တာ စတဲ့လုပ်ရပ်တွေဟာ သောင်းကျန်းသူတွေကို အကြီးအကျယ် နံမည်ပျက်စေခဲ့ပါတယ်။
ဦးနုအစိုးရဟာ တိကျတဲ့ကြားနေရေးဝါဒကိုကျင့်သုံးခဲ့ပြီး ဦးနုဟာ အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတ ဆူကာနို၊ အိန္ဒိယ ဝန်ကြီးချုပ် နေရူး၊ အီဂျစ်သမ္မတ နာဆာ၊ ယူဂိုဆလားဗီးယားသမ္မတ မာရှယ်တီးတိုး တို့နဲ့အတူ ဘန်းဒွန်း ကွန်ဖရင့် နဲ့ ဘက်မလိုက်နိုင်ငံများအဖွဲ့တို့ကို ဦးဆောင်သူဖြစ်ခဲ့လို့ မြန်မာနိုင်ငံဟာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဆက်ဆံရေးမှာ နာမည်ကောင်းခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လဲ မြန်မာနိုင်ငံသားဦးသန့်ကို ၁၉၆၁ မှာ နိုင်ငံတကာ က ယုံယုံကြည်ကြည် ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်အဖြစ်ရွေးချယ်ခန့်အပ်ကြတာပါ။
၁၉၅၄ မှာ ဦးနုဟာ သူ့အတွင်းဝန် ဦးသန့် (နောင် ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်) နဲ့အတူ အိမ်နီးချင်း ယိုးဒယားနိုင်ငံကို ချစ်ကြည်ရေးခရီးသွားပြီး ဗမာဘုရင်တွေ ယိုးဒယားပြည်ကိုတိုက်ခဲ့မိတာတွေအတွက် ခွင့်လွှတ်စေလိုကြောင်းတောင်းပန်ပြီးအယုဒ္ဓယမြို့ဟောင်းပြင်ဆင်ဖို့ အဲဒီခေတ်ကကျပ်ငွေနှစ်သန်း (အမေရိကန်ဒေါ်လာ လေးသိန်း) လက်ဆောင်ပေးပါတယ်။ အတိတ်ကိုအတိတ်မှာဘဲထားခဲ့ကြဖို့ ပန် ကြားပြီး အနာဂတ်ချစ်ကြည်ရေးအတွက် ယိုးဒယားဘက်ကလဲ ရွှေတိဂုံစေတီရဲ့ထီးတော်ကို ယိုးဒယားက လုသွားတဲ့ရွှေတွေနဲ့လုပ်ထားတယ်ဆိုတဲ့ ကောလဟာလမျိးတွေ ရပ်ကြရန်ပန်ကြားခဲ့ပါတယ်။ နောက် ပိုင်းမှာ တစ်နှစ်တစ်ကြိမ် ယိုးဒယား – မြန်မာ ချစ်ကြည်ရေး အားကစားပြိုင်ပွဲတွေ သူတစ်လှည့်ကိုယ်တစ် လှည့် အိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပလာနိုင်ပါတယ်။ ဒီ ချစ်ကြည်ရေးအားကစားပြိုင်ပွဲတွေဟာ ၁၉၅၉ ခု ကစပြီးကျင်းပလာနိုင်တဲ့ ကျွန်းဆွယ်အားကစားပြိုင်ပွဲ တွေရဲ့အုတ်မြစ်ပါဘဲ။ ၁၉၅၉ ခုမှာတော့ ယိုးဒယား ဘုရင်နဲ့မိဖုယား မြန်မာနိုင်ငံကို ချစ်ကြည်ရေးခရီး အဖြစ်လာပါတယ်။ ရွှေတိဂုံစေတီတော်ကို ဖူးမြော် တဲ့နေ့မှာ ဘုရင်နဲ့မိဖုယားနှစ်ပါးလုံး ယိုးဒယားရိုးရာ ဝတ်စုံဝတ်ထားပြီး ရွှေတိဂုံစေတီတော်ကို အဲဒီခတ် ကကျပ်ငွေငါးသောင်း (အမေရိကန်ဒေါ်လာ တစ်သောင်း) လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်။
အမေရိကန်ဒုတိယသမ္မတ ရစ်ချတ်နစ်ဆင်လည်း မြန်မာနိုင်ငံကို ချစ်ကြည်ရေးခရီးအဖြစ်လာပါတယ်။
ဆိုဗီယက်ဝန်ကြီးချုပ် ဘူဂါနင် နဲ့ ပါတီအတွင်းရေးမှူးချုပ် ကရူးရော့ဗ် တို့လဲ ချစ်ကြည်ရေးခရီး အဖြစ် နှစ်ခေါက်လာပါတယ်။ အပြန်မှာ လေယာဉ်ပျံတစ်စီးနဲ့ ကျည်ဆံမပေါက်တဲ့ကားနှစ်စီး လက်ဆောင်ပေးပြီး တောင်ကြီှးမှာခေတ်မီဆေးရုံတစ်လုံးနဲ့ကြို့ကုန်းမှာ စက်မှုတက္ကသိုလ်ဆောက်ပေးမဲ့ ကတိတွေပေးသွား ပါတယ်။ အင်္ဂလန်ကဘုရင်မကြင်ယာတော် အီဒင်ဘာရာမြို့စား ဖီလစ် မင်းသားကြီးလည်း ချစ်ကြည်ရေး ခရီးအဖြစ်လာပါတယ်။ မြန်မာပြည်ရဲ့နောက်ဆုံးအင်္ဂလိပ်ဘုရင်ခံ ဆာဟူးဘတ်ရန့်စ်ကိုလည်း ဦးနု အစိုးရကဖိတ်လို့ လာပါတယ်။
နိုင်ငံရေး ခေါင်းဆောင်တွေ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် မဲဆွယ်ရင် ငါဘယ်လောက်အနစ်နာခံပြီး ဆင်းဆင်း ရဲရဲနဲ့ နိုင်ငံရေးလုပ်ဖို့ ကြိုးစားရ တယ်ဆိုတာမျိုး မပြောကြဘူး။ ငါရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရရင် ဘယ်လို ရလဒ်ထွက်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ အချက်တွေနဲ့ မဲဆွယ်တာပါ။
မဲလိမ်မဲခိုးမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ အရပ်မဲနဲ့တပ်မဲကလဲခွဲထားတဲ့အပြင် ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရက်ကလဲ အရပ်နဲ့ တပ် တစ်ရက်စီဆိုတော့ ဖဆပလ အမတ်လောင်းနိုင်ဖို့မသေချာတဲ့ မဲဆန္ဒနယ်တွေကို ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရက် ကပ်လာမှ အစိုးရတပ်ရင်းလိုက် ပြောင်းပို့တတ်ပါတယ်။ တပ်သားတွေ၊ ဗိုလ်တွေနဲ့မိသားစုတွေ ပေါင်းလိုက်ရင် မဲ ၁၅၀၀ က ၂၀၀၀ လောက်ရှိပြီး အားလုံးကလဲ အထက်အမိန့်အရ ဖဆပလအမတ် လောင်းကို မဲပေးရတာကြောင့် အရပ်မဲမှာနိုင်ပြီး တပ်မဲနဲ့ကပ်ရှုံးခဲ့ရတဲ့ အတိုက်အခံနဲ့တစ်သီးပုဂ္ဂလအမတ် လောင်းတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ အစိုးရတပ်ချမထားနိုင်တဲ့နယ်တွေမှာ သောင်းကျန်းသူတွေက အတိုက်အခံ ပမညတ အမတ်လောင်းကိုမဲပေးရမယ်။ ပမညတ အမတ်လောင်း မနိုင်ရင် မဲဆန္ဒနယ်ကရွာတွေကို ဝင် ရောက်တိုက်ခိုက်ပြီးမီးရှို့မယ်လို့ခြိမ်းခြောက်ထားလို့ အတိုက်အခံ ပမညတ နိုင်တဲ့နယ်တွေလဲ ရှိပါတယ်။
ပြည်တော်သာခေတ်အရသာကို ရန်ကုန်၊ မန္တလေး စတဲ့မြို့ကြီးတွေမှာစံစားနိုင်ပေမဲ့ နယ်တွေမှာတော့ နီးရာဓားကြောက်နေရပါတယ်။ ရောင်စုံသူပုန်ကတစ်မျိုး အစိုးရတပ်တွေကတစ်ဖုံပါ။ ရှမ်းပြည်မှာ တရုတ် ဖြူကျူးကျော်မှုကို အကြောင်းပြကာ ဗမာစစ်သား များ တပ်စွဲပြီး ဗိုလ်ကျနေကြပါတယ်။ ဖဆပလ အစိုးရ အဖွဲ့ဝင်ဆိုရှယ်လစ်ပါတီရဲ့ ခါးပိုက်ဆောင်တပ်များ လို့ နာမည်ကြီးတဲ့ စစ်ရဲတပ်များနဲ့ပြူစောထီးတပ်တွေ ကလဲ နယ်တွေမှာထင်ရာစိုင်းကြတယ်။ နာမည်ကျော် သယာဝတီခရိုင် မင်းလှလူသတ်မူတို့ မြိတ်မပို ဘယ်ရောက်သွားမှန်းမသိပျောက်သွားတာတို့ဟာ ဂါတ်တဲနားမှာဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ ပုလိပ်တွေဘာမှမလုပ်ရဲကြ ဘူး။ နောက်ဆုံးသိပ်လွန်လာပြီး မြိတ်နားကပင်လယ်ပြင်ထဲမှာ “အောင်ကြီးသာ” ဆိုတဲ့စက်လှေကို ဓားပြတိုက်၊ ခရီးသည်တွေသတ်ပြီး စက်လှေကိုပင်လယ်ကြောမျှောထားတဲ့ကိစ္စကျမှ ပြူစောထီးတွေကို အရေးယူရပြီး တရားခံပြူစောထီးဗိုလ် ချစ်လှိုင်နဲ့ထွန်းဝိုင်းတိုိ့ကို တရားရုံးက သေဒါဏ်ချမှတ်လိုက်တယ်။
နောက်အဆိုးတစ်ချက်က ဖဆပလခေတ်တရားရေးဝန်ကြီးဌာနကိုဦးစီးသူ ဝန်ကြီးဟာ ဦးခင်မောင်လတ် ခေါ် အဗ္ဗဒူလတစ်ဖြစ်ပါတယ်။ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာနက တရားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့အောက်မှာရှိတော့ ရခိုင်ပြည်မြောက်ပိုင်းမှာ ခိုးဝင်နေတဲ့ ခေါ်တောကုလားတစ်သိန်းကျော်ဟာ ဝန်ကြီး ဦးခင်မောင်လတ်ခေါ် အဗ္ဗဒူလတစ်ရဲ့ကောင်းမှုကြောင့် မြန်မာစကားရောစာပါတစ်လုံးမှမတတ်ဘဲ အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ကတ် ပြားများရသွားကြပြီး မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်သွားရာကတဆင့်သမိုင်းလိမ်ရိုဟင်ဂျာအမည်ခံပြီး တိုင်းရင်းသား အတု၊ တိုင်းရင်းသားယောင်လုပ်ရန် ကြိုးစားလာကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
၁၉၅၇ ခုနှစ် အိမ်နီးချင်းယိုးဒယားနိုင်ငံမှာ ဖီးမာရှယ်ဆရစ်တာနာရပ်ခေါင်းဆောင်တဲ့စစ်တပ်က အာဏာ သိမ်းလိုက်လို့ ၀န်ကြီးချုပ် ပီဘူဆွန်ဂယမ်ဟာ ရန်သူ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကို မိုးကြိုးငှက် (Thunder Bird) အမည်ရှိကားနဲ့ထွက်ပြေးရတဲ့ဓာတ်ပုံ “မှန်ကင်းတစ်လှည့် ထင်းတစ်လှည့်” ခေါင်းစဉ် နဲ့မြန်မာသတင်းစာ တွေမှာ ပါလာပါတယ်။ နောက်တစ်ရက်နှစ်ရက်အကြာမှာဝန်ကြီးချုပ်ဦးနုက “ကွန်မြူနစ်တစ္ဆေနဲ့ဖက်ဆစ် သရဲ”ဆိုတဲ့မိန့် ခွန်းပြောပါတယ်။ သူက ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးအပြီးမှာ ကိုလိုနီနိုင်ငံတွေ လွတ်လပ်ရေးရ လာကြောင်း၊ လွတ်လပ်ခါစနိုင်ငံ အများစု က လက်ဝဲ၀ါဒဘက်ကို ယိမ်းကြကြောင်း၊ ဒါပေမဲ့ လုံးဝ လက်ဝဲနိုင်ငံအဖြစ်မရောက်မခြင်း လက်ဝဲအုပ်စုကမကြေနပ်လို့ ကွန်မြူနစ်သူပုန်တွေပေါ်လာကြောင်း၊ အမေရိကန်ခေါင်းဆောင်တဲ့ အခြားအုပ်စုကလဲ ကွန်မြူနစ်မဖြစ်ပြီးရော လို့သဘောထားကာ ကွန်မြူနစ် ဆန့်ကျင်သူဆိုရင် ဘယ်သူ့ ကိုမဆိုထောက်ခံ အားပေးကြောင်း၊ ဒါကြောင့် အမေရိကန်အကူအညီယူတဲ့ ဖွံ့ ဖြိုးစနိုင်ငံတချို့မှာဒီမိုကရေစီ ဆိပ်သုဉ်းသွားပြီး စစ်အာဏာရှင်၊ ဖက်ဆစ် အာဏာရှင်စံနစ်များပေါ် လာကြောင်းကိုပြောပြီး တောင်အမေရိကနိုင်ငံများ၊ ယိုးဒယား၊ တောင်ကိုးရီးယား၊ ပါကစ္စတန်စတဲ့နိုင်ငံ တွေကိုဥပမာပေးသွားပါတယ်။ ဦးနုက တချို့ ဒီမို ကရေစီအစိုးရတွေဟာ ကွန်မြူနစ်ကို အကြောက်လွန် ပြီး စစ်တပ်ကိုချဲ့ထွင်ကြကြောင်း၊ ဒီကိစ္စဟာ တစ္ဆေကြောက်ပြီးသရဲမွေးတဲ့လူနဲ့တူကြောင်း၊ တစ်နေ့မှာ ယိုးဒယားပြည်ကပြသွားတဲ့ဥပမာအတိုင်း ကွန်မြူနစ်တစ္ဆေကိုဟန့်တားနိုင်ပေမဲ့ စစ်ဖက်ဆစ်သရဲက ဂုတ်ချိုးတာခံလိုက်ရမှာဖြစ်ကြောင်း စကားပြောတရားဟောကောင်းသူပြီပြီ၊ ဥပမာ၊ ဥပမေယျအစုံစုံ နဲ့ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။
ဦးနုဟာ ဗေဒင်ယုံသူ၊ နတ်ယုံသူ၊ အယူသည်းသူအဖြစ်နာမည်ကြီးခဲ့ပေမဲ့ သူကိုယ်တိုင်နဲ့မြန်မာပြည်သူ ပြည်သားတွေဟာ သူပေးတဲ့ဥပမာအတိုင်းမကြာခင် သရဲဂုတ်ချိုး ခံရတော့မယ်လို့ ဘယ်ဗေဒင်ဆရာ၊ဘယ်နတ်ကတော်၊ ဘယ်ပုဏ္ဏား ကမှ ကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ်ခြင်း၊ နိမိတ်ဖတ်ခြင်းတို့မပြုခဲ့ကြတာ အံ့ဩစရာပါ။ တစ္ဆေကြောက်တဲ့ ဖဆပလအစိုးရဟာ သရဲမွေးမိလို့ဂုတ်ချိုးခံလိုက်ရတယ်။ သရဲကို ငယ်နိုင်လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကိုယ်အထင်ရှိခဲ့ကြတဲ့ ဦးဗဆွေ (ကျားကြီး)၊ ဦးကျော်ငြိမ်း၊ ဗိုလ်ခင်မောင်က လေး၊ စတဲ့ဆိုရှယ်လစ်ခေါင်းဆောင်တွေဟာလဲ သရဲက ဆရာကိုကာပြန်ပြီး ဂုတ်ချိုးပြတော့မှ “ဆရာမနိုင် နှစ်ဆောင်ပြိုင်” ဇာတ်ကနေရမှန်း သိသွားရပါတော့တယ်။ သူတို့ချည်းခံရရုံဆိုရင် တော်ပါသေးတယ်။ အခုတော့ မဆီမဆိုင်ပြည်သူကြီးခမျာမြေဇာပင်ဖြစ်ခဲ့ရတာ အနှစ်ငါးဆယ်ကျော်ခဲ့ပါပြီ။ ဦးနုကြီး ဒီမိန့်ခွန်း ကိုပြောခဲ့တဲ့အချိန်က မမွေးဖွားခဲ့သေးသူများရဲ့သားမြေးများတောင် အခုအထိ သရဲဂုတ်ချိုးခံနေရဆဲပါ။
မြန်မာပြည်ဟာ စစ်အစိုးရအဆက်ဆက်အာဏာရူးပြီး အနှစ် ၅၀ လောက်နှိပ်စက်လိုက်လို့ ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းနိမိတ်ဖတ်ခဲ့တဲ့ “ဟိုနိုင်ငံ”ဖြစ်လုနီးဘဝရောက်သွားရတာပါ။ ၁၉၆၂ ခု ဗိုလ်နေဝင်းတို့ အာ ဏာမသိမ်းခင် ဦးနုခေတ် မြန်မာပြည်အခြေအနေဟာ တောင်ကိုရီးယားအောက်မှာမရှိပါဘူး။ ကျွန်းဆွယ် ပွဲကိုအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပပေးနိုင်တာ ယိုးဒယားနဲ့မြန်မာဘဲရှိပါသေးတယ်။ ၁၉၆၃ ခု ကျွန်းဆွယ်ပွဲ ကိုအိမ်ရှင်လုပ်ရမဲ့ သီဟာနုခေတ်ကမ္ဘောဒီးယားက သပိတ်မှောက်လိုက်တော့ အခုချမ်းသာနေတဲ့ မလေးရှားကတောင် သူအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်မခံနိုင်သေးပါဘူး၊ ၁၉၆၅ ခုနှစ်မှလက်ခံပါရစေ ၁၉၆၃ ခု ကျွန်းဆွယ် ပွဲကို ယိုးဒယားနဲ့မြန်မာတစ်ပြည်ပြည်က အိမ်ရှင်ပြန်လုပ်ပေးပါလို့ပြောနေရတဲ့အချိန်ပါ။ အဲဒီအချိန်က တရုတ်ကျွန်းလို့အခေါ်ခံခဲ့ရတဲ့စင်္ကာပူဟာ မလေးရှားပြည်ထောင်စုထဲက ခွဲမထွက်ရသေးပါဘူး။ ယိုးဒယားကပြည်တွင်းရေးကိစ္စကြောင့်လက်မခံနိုင်၊ မြန်မာပြည်ကဗိုလ်နေဝင်းကလည်းအာဏာသိမ်းအပြီး ဂျူလိုင် လ ၇ ရက်မှာကျောင်းသားတွေပစ်သတ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စကစလို့နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်တော့ လက်မခံနိုင်ဘူး။ ဒီလို နဲ့တတိယအကြိမ်ကျွန်းဆွယ်ပွဲကို ၁၉၆၅ ခုနှစ်မှာမှ မလေးရှားမှာကျင်းပပေးနိုင်ပါတယ်။
“မြန်မာပြည်ခုလိုဒုက္ခရောက်ရတာ ကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးကောင်စီဝင်တွေရဲ့အပြစ်ပါ”လို့ ဗိုလ် အောင်ကြီးက ၁၉၈၈ မှာ ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ ဗိုလ်နေဝင်းနဲ့မဆလ ဗဟိုကော်မတီဝင်တွေဆီပို့တဲ့ ဗိုလ်အောင် ကြီးရဲ့အိတ်ဖွင့်ပေးစာမှာ အကြောင်းစုံပါပါတယ်။
Posted by U NU OF BURMA at 8/23/2015 05:51:00 PM0comments Links to this post
သိ၍ ရေးသည်ပဲလား၊ မသိဘဲ ရမ်းရေးသည် လားတော့မသိ။ ဂျာနယ်တစောင်က လုပ်ချလိုက် သည်မှာ လိင်ဝန်ဆောင်မှု ခရီးသွားလုပ်ငန်းတဲ့။ ဧည့်လမ်းညွှန်မလေးများက နိုင်ငံခြားသားများကို လိင်ဝန်ဆောင်မှုပေးနေသလိုလို ရေးထားသည်။ သူတို့ထောက်ပြသောအကိုးအကားမှာ တရုတ်တန်း ၁၉ လမ်း ဘီယာဆိုင်တဆိုင်၌ ဧည့်လမ်းညွှန် (ဖြစ်ပုံရသော) ကောင်မလေးတယောက်သည်၊ လူငယ် နိုင်ငံခြားသားတယောက်နှင့် အများမြင်ကွင်းတွင် ကယုကယင် ယုယကြင်နာနေကြသည်မှာ ညားခါစ လင်မယားသဖွယ် ရှိပါပေသည်တဲ့။ အမျိုးဂုဏ်ကို မစောင့်၊ အရှက်အကြောက်မရှိ ပြုမူနေသဖြင့် လိင် ၀န်ဆောင်မှု ခရီးသွားလုပ်ငန်းဖြစ်နေသည်ဟု ရေးသားထားတာ ဖတ်ရပါသည်။ သတင်းစာလောက အနေနှင့်ပြောရလျှင် လူကိုခွေးကိုက်တာ သတင်းမဟုတ်၊ ခွေးကိုလူကိုက်တာသတင်းဟုဆိုလေ့ရှိသဖြင့် ဤဆောင်းပါးသည် သတင်းထူးဖြစ်သည်။ လူစိတ်ဝင်စားမည့် သည်းခြေကြိုက်သတင်းဖြစ်သည်။ သို့သော် အင်္ဂလိပ်ဘာသာတွင် Too good to be true ဟူသော စကားပုံရှိသည်။ ''သတင်းက အရမ်းကို ကောင်း လွန်းနေတယ်၊ ဒါပေမဲ့ ဟုတ်ကော ဟုတ်ပါ့မလား'' ဟူသော အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်သည် သတင်း မီဒီယာလောကတွင်ရော ခရီးသွားလုပ်ငန်းတွင်ပါ နှစ်ဖက်စလုံး ထဲထဲဝင်ဝင်သိနေဖြင့် သတင်းတပုဒ် တက်လာလျှင် ချင့်ချိန်ပြီးမှယုံပါသည်။ လေ့လာဆန်း စစ်မှုကို မိမိအသိဥာဏ်ဗဟုသုတနှင့် ဆန်ခါတိုက် ချပြီးမှ ယုံပါသည်။ တိုးရစ်လောကကို ဂျာနယ် သမားများသည် သေသေချာချာမသိနိုင်။ စာနယ်ဇင်း လောကကိုလည်း ခရီးသွားလုပ်ငန်းမှလူများ အပြည့် အစုံနားမလည်နိုင်။ ကျွန်တော်မည်သည့်ဘက်သို့မျှ မလိုက်ဘဲ ရေးပါမည်။
ဂျာနယ်လစ်များအပါအ၀င် မြန်မာနိုင်ငံတွင် လူတော်တော်များများ နားလည်မှုလွဲနေသောကိစ္စတခု ရှိပါသည်။ ထိုအရာမှာ အခြားမဟုတ် နိုင်ငံခြားသားတယောက်နှင့် တွဲလာသောလူကို ဧည့်လမ်းညွှန် (Tourist Guide) ဟု ထင်တတ်ကြခြင်းဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် နိုင်ငံခြားသား အမျိုးသားများနှင့် တွဲလာသောမိန်းကလေးများကို ဧည့်လမ်းညွှန် (ပုဂံ ဒေသကလူတွေအခေါ် ဂိုက်ဒ်မ)ဟု ထင်တတ်ကြ သည်။ သို့သော် ပုဂံကလူတွေကတော့ နိုင်ငံခြားသားများ၊ ဧည့်လမ်းညွှန်များကို မြင်နေကျဖြစ်နေသဖြင့် မည်သူသည်ဂိုက်ဒ်၊ မည်သူသည် ဂိုက်ဒ် မဟုတ်ဘူးဆိုတာ သိကြသည်။ ကျွန်တော်တို့ကတော့ ခရီးသွားလုပ်ငန်းတွင် အနှစ် ၂၀ ခန့် အတွေ့အကြုံ ရှိလာပြီးနောက် လူတယောက်ကို မြင်လိုက်တာနှင့် ဂိုက်ဒ်ဟုတ်သည် မဟုတ်သည်သာမက၊ သူသည် မည်သည့် သင်တန်းအပတ်စဉ်က ဆင်းသည်၊ မည်သည့် နိုင်ငံခြားဘာသာစကားပြောသည် (ဥပမာ စပိန်ဂိုက်ဒ်လား၊ ပြင်သစ်ဂိုက်ဒ်လား၊ အီတလီဂိုက်ဒ်လား) ကို တန်းသိပါသည်။ စစ်သားသည် အခြားစစ် သားတယောက်ကို လမ်းလျှောက်ပုံမြင်ရုံနှင့် (ယူနီဖောင်း ၀တ်မထားစေကာမူ)စစ်သားပဲဟု အလွယ် တကူ သိသကဲ့သို့ ကျွန်တော်တို့ ဂိုက်ဒ်များသည် အများအားဖြင့် နိုင်ငံခြားသားနှင့် တွဲလာသူတယောက်ကိုမြင်ရုံမျှနှင့် တရားဝင်လိုင်စင်ရ ဧည့်လမ်းညွှန် ဟုတ်မဟုတ် ခွဲခြားနိုင်ပါသည်။ ၀ါနုသော ဧည့်လမ်းညွှန်ပေါက်စဆိုလျှင်တော့ ထိုသို့ ခွဲနိုင်မှ ခွဲနိုင်ပေမည်။ သို့သော်အများအမြင်တွင် ထိုသို့ခွဲခြားနိုင်သည် မဟုတ်ရကား နိုင်ငံခြားသားနှင့် တွဲလာသောသူတယောက်ကို ဧည့်လမ်းညွှန် (တိုးရစ်ဂိုက်ဒ်) ဟု အလွယ်တကူ ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတော့၏။
ကျွန်တော့် ကိုယ်တွေ့တွေကို ပြောပြပါမည်။ ၂၀၀၅/၂၀၀၆ လောက်က '' . . . ''ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့် ကျွန်တော် Group Tour တခု ဂိုက်ဒ်အဖြစ်လိုက် ရပါသည်။ ဧည့်သည်များမှာ ရေနွေးငွေ့မီးရထားစက်ခေါင်း ၀ါသနာရှင် အင်္ဂလိပ်များ ဖြစ်ပါသည်။ လူ ၂၆ ယောက်ခန့်ပါသော အဖွဲ့ကြီးဖြစ်သည်။ ထိုအဖွဲ့ခေါင်းဆောင် အင်္ဂလိပ်အဘိုးကြီးသည် တမြို့မှတမြို့ သွားလာလည်ပတ်ရင်း မြန်မာမိန်းကလေးလှလှလေးများကို နေ့စဉ်မြင်တွေ့ရာမှ စိတ်မထိန်းနိုင်တော့ဘဲ သူ့အတွက် မိန်းကလေးတယောက်ရှာပေးရန် ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ကို ပူဆာပါသည်။ ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ကလည်း သူ့အဆက်အသွယ်ဖြင့် ရန်ကုန်မြို့မှ မစန္ဒာဆိုသော အထက်တန်းစားပြည့်တန်ဆာတယောက်ကို စီစဉ်ပေးလိုက်ပါသည်။ ထိုမစန္ဒာသည် ဂိုက်ဒ် မဟုတ်ပါ။ ရုပ်ရည် အလွန်သန့်ပြန့်ပါသည်။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကို အသင့်အတင့် ပြောနိုင်ပါသည် (အောင်မယ် လက်ထဲတွင် သာလွန် မြန်မာ-အင်္ဂလိပ် စကားပြော အိတ်ဆောင်စာအုပ်ကိုပင် သွားလေရာယူ လာပါသည်)။ ထိုမစန္ဒာသည် တမြို့မှတမြို့သို့ ခရီး သွားလာရာတွင် ကျွန်တော်တို့နှင့် ရထားတစ်စီးတည်း၊ ကားတစ်စီးတည်း အတူမလိုက်ပါ။ သို့သော် ကျွန်တော်တို့ရောက်သွားသောနေရာတိုင်းတွင် ဟိုတယ်သို့ဝင်လိုက်သည်နှင့် မစန္ဒာက ကြိုရောက်နေပါသည်။ သူနှင့် နိုင်ငံခြားသားအဘိုးကြီးသည် အခြား တိုးရစ်များ တည်းခိုသောအခန်းနှင့် ခပ်ဝေးဝေးတွင် အခန်းယူ၍ တည်းခိုကြပါသည်။ ညဘက်တွင် သူတို့နှစ်ယောက် (လင်မယားများသဖွယ်) အပြင်သို့ ထွက်လည်ကြပါသည်။ အကြောင်းမသိသူ ဂျာနယ်လစ်တယောက်က တွေ့ခဲ့ပါလျှင် ဧည့်လမ်းညွှန် (တိုးရစ်ဂိုက်ဒ်မလေးက) လိင်ဝန်ဆောင်မှုပေးနေသည်ဟု ထင်စရာဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်ကလည်း ကိုယ့်အလုပ် ချိန်တွင် ဘာမှဝင်ရောက်နှောင့်ယှက်ခြင်းမပြုသဖြင့် ဘာမှ မဝေဖန်ခဲ့ပါ။ ထိုအမျိုးသမီးသည် ရန်ကုန်၊ ပဲခူး၊ မန္တလေး၊ ပုဂံ၊ ပြင်ဦးလွင်တို့အထိ တောက်လျှောက်လိုက်ပါလာပါသည်။ ထိုခရီးသွားခေါင်းဆောင် (Tour Leader) အဘိုးကြီးသည် မြန်မာပြည်သို့ မကြာခဏ နိုင်ငံခြားသားများကိုခေါ်၍ လာလည်ရာ သူရောက်လာတိုင်းပင် ခရီးသွားကုမ္ပဏီက မစန္ဒာကို လက်စွဲအဖြစ် လိုက်ပါစေပါသည်။ မြန်မာပြည်သို့ ထိုနိုင်ငံခြားသားကြီး နောက်ဆုံးအခေါက်အဖြစ် ရောက်လာစဉ်က ကျွန်တော်မ,အားသဖြင့် ဂိုက်ဒ်မလိုက်နိုင် သော်လည်း ညစာစားပွဲသို့ ကျွန်တော်တို့ လင်မယားကိုဖိတ်ရာ သွားရောက်စားသောက်သောအခါ အဘိုး ကြီးသည် မစန္ဒာနှင့်နှစ်ယောက်တွဲ ကြွရောက်လာပါသည်။ မသိလျှင် လင်မယားနှစ်စုံတွဲလိုလို ဘာလိုလို ဖြစ်နေပါသည်။ ကျွန်တော့်မိန်းမ အနေခက်မည် စိုးသဖြင့် မစန္ဒာသည် ဇယားဆိုတာ ကျွန်တော်ထုတ် မပြောလိုက်ပါ (သို့သော် မိန်းမက ရိပ်မိမည်ထင်ပါသည်)။ ဆိုလိုရင်းမှာ နိုင်ငံခြားသားနှင့် သွားလာစား သောက်တပူးတွဲတွဲနေထိုင်သော မစန္ဒာလို မိန်းကလေး များစွာရှိပါသည်။ မသိသူများအမြင်တွင် ဧည့်လမ်းညွှန် ဟု ထင်စရာပဲဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ ဧည့်လမ်းညွှန်များမှာ လိုင်စင်ကတ်ပြားကြီးကို အမြဲချိတ် ထားနိုင်သည်လည်းမဟုတ်၊ နဖူးတွင် ချိုပေါက်နေသူများလည်း မဟုတ်ရာ အချောင်နေရင်း နာမည်ပျက် ရသည့်ကိန်း ဆိုက်နေပါသည်။
နောက်ထပ်ကြုံရသည်ကိုလည်း ပြောပြပါမည်။ ရန်ကုန်မြို့တွင် နိုက်ကလပ်များစွာ ရှိပါသည်။ ထိုအထဲကမှ တာမွေမြို့နယ်အတွင်းရှိသော ဂျေဂျေ(JJ) နိုက်ကလပ်နှင့် ဒဂုံမြို့နယ်၊ ယောမင်းကြီးလမ်း Park Royal ဟိုတယ်မြေအောက်ထပ်တွင် ဖွင့်ထားသော club မှာ အပျော်အပါးကိစ္စအတွက် ထင်ရှားပါသည်။ နိုင်ငံခြားသားများသည် ညအိပ်ဖော်လိုလျှင် ထိုက လပ်များသို့ပဲ သွားပါသည်။ သိမ်ကြီးဈေးအနီးမှ ကလပ်များမှာလည်း ထိုကိစ္စအတွက် ကျော်ကြားပါသည်။ ကျွန်တော်သည် ထိုကလပ် နှစ်ခုစလုံးသို့ နိုင်ငံခြားသားများနှင့် ရောက်ဖူးပါသည်။ ဂျေဂျေ ကလပ်မှာ အနည်းငယ် လူစည်ကား ရှုပ်ထွေးပြီး အပေါစားမိန်းကလေး အများစုရှိပါသည်။ ထိုကလပ်ဝယ် ညစဉ်ညတိုင်း အရွယ်ကောင်းရုပ်ချောသော ကောင် မလေးတွေ ငါးဆယ်၊ ခြောက်ဆယ်ခန့် တရုန်းရုန်းဖြစ်နေပါသည်။ ကလပ်သို့ ၀င်ကြေးအဖြစ် ယောကျာ်းလေးများမှာ တယောက် ငွေငါးထောင်ကျပ်ပေးရပါသည်။ သူတို့က ဘီယာတဘူး (သို့မဟုတ်) အချိုရည်တဘူး ပြန်ဧည့်ခံသည်။ ကလပ်သို့လာသည့် ယောကျာ်းလေးများမှာ နိုင်ငံခြားသားတ၀က် မြန်မာတ၀က်ခန့်ရှိပါသည်။ နိုင်ငံခြားသားများတွင် အထူးသဖြင့် အရှေ့တိုင်းသားများဖြစ်သော တရုတ်၊ ထိုင်ဝမ်၊ ကိုရီးယားလူမျိုးများ များပါသည်။ ဥရောပ တိုက်သားသိပ်မပါပါ။ ကောင်မလေးတွေကတော့ အပြင်မှာတွေ့လျှင် မိန်းမပျက်ဟု နာမည်တပ်ရခက် လောက်အောင် ခေတ်မီလှပ ငယ်ရွယ်ကြသူများပါ သည်။ သူတို့သည် တညအတွက် လုပ်အားခငွေ တသိန်းခန့်တောင်းဆိုကြပါသည်။ ဗမာတွေကတော့ ဈေးဆစ်တတ်သဖြင့် လေးငါးသောင်းနှင့်ရပါသည်။ ဒါ့ကြောင့် ကောင်မလေးတွေသည် ကိုယ့်မြန်မာလူ မျိုးချင်းအနားမကပ်ဘဲ တရုတ်၊ ကုလား၊ ကိုရီးယား၊ အမေရိကန်များနောက်သို့ ကောက်ကောက်ပါအောင် လိုက်သွားကြတာ များပါသည်။ ကျွန်တော်နားမလည် နိုင်သောအချက်မှာ ထိုနေရာသည် ရန်ကုန်မြို့၏ အကြီးဆုံးပြည့်တန်ဆာဈေးကွက်ကြီးဖြစ်နေပါလျက် သက်ဆိုင်ရာမှ ဘာလို့အရေးမယူသလဲဆိုတာ စဉ်း စား၍မရပါ။ ကလပ်ပိုင်ရှင်များမှာ အခြေအမြစ်ကျကျ လိုက်စုံစမ်းကြည်လျှင် အာဏာပိုင် စစ်ဘက်အရာရှိ ကြီးများနှင့် တဦးမဟုတ်တဦး ပတ်သက်နေတာ တွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။ မြန်မာပြည်တွင် မဟုတ်တာမှန်သမျှ ဘက်ဂရောင်းကြီးကြီးလိုသည် မဟုတ်ပါလား။ ထို့ကြောင့်လည်း ပြည့်တန်ဆာများအတွက် လုံခြုံသော အရောင်းစင်တာ (Sex Market) ကြီးဖြစ်နေခြင်းပင်။ မီးရောင်မှိန်မှိန်တွင် အတတ်နိုင်ဆုံး ဖော်ချွတ်ဝတ်စုံများ ၀တ်ထားကြသော ကောင်မလေးများအပြင် ပြည့်တန်ဆာခေါင်းဖြစ်ဟန်တူသော အသက် ၅၀ ကျော် ၆၀ အမျိုးသမီးကြီးများသည် နိုင်ငံခြားသားများနှင့် တီးတိုး (ပေါ်တင်) ဈေးဆွေးနွေးကြပြီးနောက် ဈေး တည့်သောအခါ ကောင်မလေးက”''ခဏနော် (please wait)''ဟုဆိုကာ နောက်ဖေးဘက်ရှိအ၀တ်လဲ ခန်းထဲသို့ဝင်သွား၏။ ထိုကောင်မလေးပြန်ထွက်လာသောအခါ လူပင်မှားလောက်စရာ ဖြစ်သည်။ ယခင်က (အလုပ်မဖြစ်ခင်) ၀တ်စားထားသော Sexy စတိုင်လ် အ၀တ်အစားများမဟုတ်တော့ဘဲ ထဘီနှင့် မြန်မာ အင်္ကျီနှင့် ကောင်မလေးဖြစ်သွားသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ထိုကောင်မလေးသည် မျက်နှာပြုံးရွှင်လျက် နိုင်ငံခြားသားကို လက်ချင်းချိတ်ကာ ဓာတ်လှေကားမှဆင်းသွားပြီး မကြာခင် ရန်ကုန်မြို့အနှံ့ရောက်ချင်ရာ ရောက်တော့သည်။ ဟိုတယ်သို့တန်းသွားချင်သွားမည်။ တရုတ်တန်းမှာ ညစာစားချင် သွားစားမည်။ ရွှေတိဂုံသို့ တက်ဖူးချင်ဖူးမည်။ မြို့ထဲတွင် လက်ချင်းချိတ်၍ လမ်းလျှောက်ချင် လျှောက်မည်။ မည်သူ သိအံ့နည်း။
Park Royal ဟိုတယ် မြေအောက်ထပ်ရှိ ကလပ်မှာ ပို၍သေးငယ်သည်။ သာ၍တိတ်ဆိတ်သည်။ လူပိုနည်းသည်။ သို့သော် အဆင့်အတန်း ကွာလတီ ပို၍မြင့်သည်။ ၀င်ကြေးပေး၍ ကလပ်ထဲဆင်းသွားလျှင် ခပ်ငြိမ့်ငြိမ့် တီးခတ်နေသော တေးဂီတ၀ိုင်းတ၀ိုင်းကို တွေ့ရမည်။ မီးရောင်မှိန်မှိန်ဝယ် Live တီးခတ်ဖျော် ဖြေနေကြသူများမှာ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှ အမျိုးသမီးများ ဖြစ်သည်။ ဖိလစ်ပိုင်များက တီးမှုတ်ပြီး သူတို့ကပဲ အင်္ဂလိပ်လို သီဆိုနေကြခြင်း ဖြစ်သည်။ ကလပ်ထဲမှာတော့ မြန်မာမိန်းကလေး ၁၅ ယောက် အယောက် ၂၀ ခန့်ပဲရှိသည်။ သို့သော် ထို ၁၅ ယောက်ခန့်မှာ ရုပ်ရှင်မင်းသမီးတမျှ၊ မော်ဒယ်လ်တမျှ လှပကြသူများ ဖြစ်သည်။ ၀တ်ပုံစားပုံက ဂျေဂျေကလပ် မှ ကောင်မ လေးများထက်ပို၍ အဆင့်အတန်းရှိသည်။ တန်ဖိုးကြီး အသုံးအဆောင်များကိုသာ အသုံးပြုသည်။ အချို့သည် ကိုယ်ပိုင်ကားကိုပင် မောင်းလာကြသည်။ သူတို့သည် အင်္ဂလိပ်စကားကို ကောင်းကောင်း ပြောနိုင်သည်။ နုနုနယ်နယ်ချစ်စဖွယ် အထက်တန်းစားပုံ ကလေးများဖြစ်သည်။ သူတို့တွင် မြန်မာနိုင်ငံကူး လက်မှတ်လည်း လက်ထဲတွင် အဆင်သင့်ရှိသည်။ ဘန်ကောက်ကို သွားချင်သလား၊ စင်ကာပူသို့ ခရီးဆက်မလား၊ ဖူးခက်ကမ်းခြေသို့ ဟန်းနီးမွန်း ထွက်ချင်သလား၊ သူတို့အလိုရှိသောငွေကိုပေးနိုင်လျှင် အားလုံးအသင့်ရှိသည်။ ဂျေဂျေကလပ်လို မြန်မာ ငွေနှင့်ဈေးစကားမပြော၊ သူတို့လုပ်အားခမှာ ဒေါ်လာဖြင့် တွက်ချက်တောင်းဆိုသည်။ အထည်ချုပ်စက်ရုံမှ အလုပ်သမများ တနေ့လုပ်ခ ၃၆၀၀ ကျပ်ခန့်ရရန် အာပေါက်မတတ် ညှိနှိုင်းနေရဆဲဖြစ်သော်လည်း ထိုနိုက်ကလပ်မှ မမများက တညဒေါ်လာ ၂၅၀- ၃၀၀ မရလျှင် အင်တင်တင်။ မြန်မာဆို လှည့်၍ပင် မကြည့်။ ဈေးဦးမပေါက်၍ ဈေးပေါင်ကျိုးကာမှ မြန်မာကို စိတ်ကူးသည်။ သူတို့ပစ်မှတ်သည် နိုင်ငံခြားသား။ သူတို့ တညတာ တည်းခိုရာအရပ်သည် Sedona တို့၊ Shangrila တို့၊ Park Royal ဟိုတယ်တို့မှ တပြားမှမလျှော့။ နံနက်စောစော ဟိုတယ်များသို့သွားကာ လေယာဉ်ခရီးအတွက် နိုင်ငံခြားသား သွားခေါ်ရသောအခါများတွင် ဟိုတယ်ဧည့်ကြိုခန်းမ၌ ထိုမမများနှင့် မကြာခဏဆုံဖူးသည်။ မော်ဒယ်လ်ဂဲလ်ပင် ရှုံးလောက်သော အပြင်အဆင်များဖြင့် ဓာတ်လှေကားထဲမှထွက်ကာ ဟိုတယ် Lobby ထဲသို့ ရောက်လာပုံမှာ မသိပါက ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တွေလား၊ NGO မှ ၀န်ထမ်းတွေလား၊ တိုးရစ်ဂိုက်ဒ်တွေ လားထင်ရသည် (အမှန်မှာ တိုးရစ်ဂိုက်ဒ်များမှာ စာရင်းအင်းများလုပ်ရ၊ ခရီးသွားဖို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရ၊ တနေ့လုံးလည်း Sightseeing ပြထားရသည့်အပြင် ကမန်းကတန်း အချိန်မီအောင် နံနက်အစောကြီး ထလာရသည့်အတွက် သူတို့လို အခြယ်အသတွေ မလုပ်နိုင်၊ ဖုတ်ပူမီးတိုက် ပုံစံတွေများသည်)။ ဟိုတယ်များတွင် ထိုကောင်မလေးတွေနှင့် နံနက် စောစောသွားတိုင်း တွေ့ရဖူးသည်။ ထိုကောင်မလေးတွေကို ဘာတွေမှန်း အစကမသိ၊ တော်တော်လှ၍ သတိထားမိသည်။ နောက်တော့ ကောင်မလေးက တက္ကစီ တစီးငှားသည်။ ဂျပန်အဘိုးကြီးတယောက် ပေါက်ချ လာပြီး တက္ကစီဖိုးရှင်းပေးသည်။ ကောင်မလေးကို ဖက်ပြီး နှုတ်ဆက်သည်။ ထိုအခါမှ ရုပ်ရည်ခပ်သန့်သန့် ကောင်မလေးမှာ ကြက်ပြန်ချိန်တွင် ပေါ်ထွက်လာသော နွမ်းလျအိမ်အပြန်ပါလားဟု သဘောပေါက်မိသည်။ ဟိုတယ်ဝန်ထမ်းတွေအားလုံး၊ တက္ကစီကား ဆရာတွေအားလုံး၊ ဧည့်လမ်းညွှန်တွေအားလုံးကတော့ ထိုကောင်မလေးတွေ ဘာဆိုတာသိနေနှင့်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ဟိုတယ်လောက၊ ခရီးသွားလောကနှင့်စိမ်း နေသူများတွေ့သွားပါက ဂျပန်နှင့်ညအိပ်ပြီး ပြန်သွားသည့် ဧည့်လမ်းညွှန်မလေးဟု ထင်ယောင်ထင်မှား သတင်းတပုဒ်ဖြစ်လောက်သည်။
တခါက အမေရိကန်တိုးရစ်ကြီး တယောက်သည် ကျွန်တော့်ကို ဧည့်လမ်းညွှန်ငှား၏။ ဧည့်သည်မှာ တယောက်တည်းဖြစ်သည်။ ရန်ကုန်လေဆိပ်မှာ ကြိုလာပြီး သမ္မတဟိုတယ်သို့ ပို့ပေးရုံလေးတင် ဖြစ်သည်။ ထိုခရီးလေး ခဏလိုက်ပေးတာကို ကျွန်တော့်အား မုန့်ဖိုး (tip) ဒေါ်လာ ၁၀၀ ပေး၏။ ထို့နောက် မနက်ဖြန် သူငပလီသို့သွားချင်သဖြင့် လေယာဉ်လက်မှတ် စီစဉ်ပေးနိုင်မလားဟုမေးရာ ကျွန်တော်က စီစဉ်ပေးနိုင်ပါသည်ဟု ပြောလိုက်သည်။ လေယာဉ်လက်မှတ်ရကြောင်း ဖုန်းဆက်ပြောသောအခါ၊ ဂိုက်ဒ်တယောက်ပါ စီစဉ်ပေးပါဟုဆိုသည်။ အမျိုးသမီးဂိုက်ဒ် ဖြစ်ရမည်ဟုပြော၏။ ရရမည်ဟု ကျွန်တော် အာမခံလိုက်သည်။ ထိုအခါ ထပ်မံတောင်း ဆိုလာသည်မှာ ထိုဂိုက်ဒ်သည် အင်္ဂလိပ်စကားသိပ် မတတ်လည်း ရသည်။
ထမင်းစားရေသောက်လောက်ပြောတတ်လျှင်တော်ပြီ၊ သို့သော် သူနှင့်အတူတူ တခန်းတည်းအတူအိပ်ရမည် ဆိုသတည်း။ ထိုအခါမှ ထိုအမေရိကန်လိုချင်သည်မှာ ဂိုက်ဒ်မဟုတ် လိုင်းဖြစ်နေမှန်းသိလိုက်ရကာ မြန်မာနိုင်ငံတွင် မည်သည့်ဂိုက်ဒ်မျှ ထိုသို့မလုပ်ကြောင်း၊ သင်ထိုမိန်းကလေး မျိုးလိုချင်ပါက ညဘက်ကျလျှင် သမ္မတဟိုတယ်မှ လမ်းဖြတ်ကူးရုံနှင့် ရောက်နိုင်သောနိုက်ကလပ်တခုရှိကြောင်း၊ ထိုကလပ်ထဲတွင် များစွာသော မိန်းကလေးများမှာ သင်ငပလီသို့ခေါ်ဆောင်ရာတွင် လိုက်ပါပေးနိုင်မည့် မိန်းကလေးများဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုပြီး ထိုလူနှင့်အဆက်ဖြတ်လိုက်ရပါသည်။ ဘယ်လိုဆက်ပြီး စခန်းသွားသလဲ မသိတော့ပါ။ အကယ်၍ ထိုအမေရိကန်ကြီးသည် ငပလီကမ်းခြေတွင် ထိုကလပ်မှကောင်မလေးနှင့် နှစ်ပါးသွား ဟန်းနီးမွန်းထွက်နေသည်ကို လူတွေမြင်ပါက မည်သို့ထင်ကြမည်နည်း။ မပြောတတ်တော့ပါ။
တခါကလည်း အသက်အစိတ်ခန့် အမေရိကန်အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်သည် ညစာစားပြီး ဟိုတယ်သို့ပြန်ချိန်တွင် ယခုညအတွက် ယောကျာ်းလေးနှစ်ယောက် အလိုရှိသည်ဟု ဧည့်လမ်းညွှန်ကို ပြောပါသည်။ ဧည့်လမ်းညွှန်မှာ မိန်းကလေး ဖြစ်ပါသည်။ ထိုမိန်းကလေးသည် ဘာလုပ်ရမှန်းမသိ ကြံရာမရဘဲ သိမ်ကြီးဈေးရှေ့နိုက်ကလပ်တခုတွင် ကားကိုရပ်ပေးပြီး ''ငါတော့ မသိဘူး။ အဲဒီကလပ်ပေါ်သာ သွားရှာပေ တော့''ဟုဆိုကာ အမေရိကန်မနှစ်ယောက်ကို ထိုနေရာတွင်ထားခဲ့သည် ဆို၏။ နောက်တနေ့နံနက်တွင် ပုံမှန်လုပ်ငန်းခွင် Yangon City Tour အတွက် ထိုဧည့်သည်နှစ်ဦးကို သူတို့တည်းခိုရာဟိုတယ်သို့သွားခေါ်ရာ စပ်ဖြဲဖြဲနှင့် အမေရိကန်မနှစ်ယောက် ကားပေါ်တက်လာကြပါသတဲ့။ ဧည့်လမ်းညွှန်မိန်းကလေးက ညကအဆင်ပြေရဲ့လားဟု မေးမြန်းရာ အဆင်ပြေကြောင်း၊ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းများ ပြန်ပြောသည်ဟုသိရ၏။ ကျွန်တော်တွေ့ဖူးသော အိန္ဒိယနိုင်ငံသားဧည့်သည်များမှာလည်း တည်းခို မည့် Traders ဟိုတယ်တွင် အထုပ်အပိုးချပြီးသည်နှင့်''မိန်းမရှာပေးပါ၊ မိန်းမ၊ ငယ်ရမယ်၊ လှရမယ်''ဟု အရူးအမဲသားတောင်းဆိုသလို ဆက်တိုက်ပြောနေရာ ကျွန်တော်က ဧည့်လမ်းညွှန်များသည် ဒါမျိုးရှာပေးဖို့ တာဝန်မရှိကြောင်း၊ ကိုယ့်ဘာသာ တက္ကစီငှားစီးပြီး နိုက်ကလပ်များသို့ သွားပါ၊ ဖြစ်လာသည့်ပြဿနာ ကိုယ့်ဘာသာရှင်းပါဟု ပြောလိုက်ရပေ သည်။ နိုင်ငံခြားသားများထဲတွင် အချို့မိန်းမလျာများလည်း ပါလာတတ်သည်။ သူတို့သည် တိတ်တိတ်ပုန်းယောကျာ်း ရှာတတ်သည်။ များသောအားဖြင့် ကလပ်များသို့ သူ့ဘာသာ ညဘက်ထွက်သွားကြတာ များပါသည်။ အချို့ NGO ၀န်ထမ်းအခြောက်များကတော့ သူတို့အလိုဖြည့်မည့်သူများ ကို ၀န်ထမ်းအဖြစ်လက်သပ်မွေးထားခြင်း၊ အချို့ကလေးချစ်တတ်သလိုလို ဘာလိုလိုဖြင့် နယ်မှကလေးများကို ဟိုတယ်သို့ခေါ်သိပ်ကာ မဟုတ်က ဟုတ်က လုပ်ခိုင်းခြင်းများလည်း ရှိသည်။
လိင်ဈေးကွက်သည် မြန်မာပြည်တွင် သူ့ဘာသာရှိနှင့်နေပြီး ဖြစ်ပါသည်။ နိုက်ကလပ်များ၊ စင်တင်တေးဂီတမှ အချို့မိန်းကလေးများ၊ ဖုန်းဖြင့်အဆက်အသွယ်လုပ်ကြသော ကြေးကြီးပြည့်တန်ဆာများ၊ အွန်လိုင်းမှ ဖောက်သည်ရှာသူများသည် မြန်မာပြည်နေရာအနှံ့ ရှိနေပြီးဖြစ်ပါသည်။ ရန်ကုန်တွင် စာကြည့်တိုက်မရှိသောမြို့နယ်သာ ရှိရမည်၊ ဘီယာဆိုင်၊ KTV နှင့် အနှိပ်ခန်းမရှိသော မြို့နယ်ဟူသည်မရှိပါ။ ရန်ကုန်မြို့တွင် တရုတ်တန်း၊ လမ်း ၂၀ (အနော်ရထာလမ်းနှင့် ဗန္ဓုလလမ်းကြား တရုတ် ဘုံကျောင်းဘေး) ထဲတွင် ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးအနီးမှာပင် လိင်ဝန်ဆောင်မှုပေးသော အနှိပ်ခန်းတခုရှိပါသည်။ စမ်းချောင်းပဒုမ္မာလမ်းထဲမှာလည်း အနှိပ်ခန်းယောင်ဆောင်ထားသော ပြည့်တန်ဆာခန်းများ ရှိပါသည်။ ကျောက်မြောင်း၊ တာမွေ၊ လမ်းမတော် စသောမြို့နယ်များတွင်လည်း လက်ညှိုးထိုးမလွဲနိုင်အောင်ရှိပါသည်။ ရန်ကုန်တမြို့လုံး မြို့နယ် အနှံ့ဖြစ်ပါသည်။ ညအခါ မင်္ဂလာဈေးအနီးမှ ယခင်တာမွေသုသာန်ဟောင်းနေရာတွင် ဆောက်ထားသော Entertainment အမည်ခံ ပလာဇာကြီး တခုသည် ရန်ကုန်မြို့၏ တရားဝင်လိင်ဈေးကွက်ကြီးဖြစ်ပါသည်။ ညအခါ ပွဲဈေးတန်းကြီးသဖွယ် မီးရောင်တထိန်ထိန်နှင့် လူအများစည်ကားနေ တတ်ပါသည်။ အခြားနိုက်ကလပ်များ၊ KTV များ၊ မာဆတ်များသည်လည်း လိင်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကို ၀ိုင်းဝန်းကူညီ ပါဝင်လုပ်ကိုင်နေကြပါသည်။ အချုပ်ပြောရလျှင် မြန်မာနိုင်ငံတွင် လိင်ဝန်ဆောင်မှုခရီးသွားလုပ်ငန်း ရှိနေသည်ဆိုခြင်းမှာ မှန်ကန်ပါသည်။ သို့သော် ဧည့်လမ်းညွှန်များက လုပ်ကိုင်နေကြခြင်း မဟုတ်ပါ။ မည်သူတွေက လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြု၍ မည်သူတွေက တရားဝင်သဖွယ် လုပ်ကိုင်နေကြသလဲ၊ မည်သူတွေကလိုင်းကြေးယူကာ မသိချင်ယောင်ဆောင်နေကြသလဲဆို၊ မည်မျှကြီးမားသောပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ထားကြသနည်း။ ဘာကြောင့် အရေးမယူ သနည်းဆိုတာ စာနယ်ဇင်းသတင်းစာဆရာများ ရေဆုံးရေဖျားလိုက်လံ စုံစမ်းရေးသားရမည့်ကိစ္စ ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့မဟုတ်ဘဲ အပေါ်ယံကြောကို ကြည့်၍ နိုင်ငံခြားသားများနှင့် တွဲလာတိုင်း ဧည့်လမ်းညွှန်တယောက်ဟု သတ်မှတ်ကာ အလွယ်ပြော၊ အလွယ်ရေး၊ အလွယ်သိက္ခာချနေကြလျှင် ခုတ်ရာတခြား ရှရာတလွဲ ဖြစ်နေကြမည် ဖြစ်ကြောင်း။ မြန်မာ့လိင် ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွင် အာဏာရအသိုင်းအ၀ိုင်းမှ ကြီးစွာခြစားပြီး ပတ်သက်မှုရှိနေသည်ကို မသိချင်ယောင် မမြင်ချင်ယောင်ဆောင်၍ မရပါ ကြောင်း ရေးသားလိုက်ရပါသည်။
Posted by U NU OF BURMA at 8/12/2015 12:20:00 AM0comments Links to this post